စွဲ, Anhedonia နှင့် Comorbid Mood Disorder ။ တစ် ဦး ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2019) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက် Porn တွင်
စွဲ, Anhedonia နှင့် Comorbid စိတ်မူမမှန်။ တစ်ဦးက Narrative သုံးသပ်ချက် (2019)
တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2019; 10: 311 ။
2019 မေလ 22 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00311
Marianne Destoop, 1,2Manuel Morrens, 1,3Violette Coppens, 1,3နှင့် Geert Dom 1, 2, *
နောက်ခံသမိုင်း: မကြာသေးမီက anhedonia စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုအားဖြင့်အရေးပါသောသုတေသနဒိုမိန်းစံနှုန်း (RDoC) အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Anhedonia တစ်ခုတည်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူစွဲလမ်းနှင့်စိတ်ဓါတ်များနှစ်ဦးစလုံးရောဂါ၏ pathogenies အတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကသူတို့ Co-ဖြစ်ပျက်မှုမှအဆိုပြုထားသည်။ သို့သော်ယခုမှတက်သည်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological circuitries, အ neurocognitive ဆက်စပ်မှုကိုရည်မှတ် anhedonia အကြောင်းကို, ပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်စွဲ, ခံစားချက်ရောဂါနှင့် comorbidity ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍရှားပါးနေဆဲဖြစ်သည်။
ရည်ရွယ်ထား: လူ့လေ့လာမှုများ၏ဤစာပေပြန်လည်သုံးသပ်တှငျကြှနျုပျတို့တ္ထုများ (DUS) ၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ဓါတ်များမမှန်အတူ comorbidity အတွက်မမှန်နှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးအတွက် anhedonia မှလေးစားမှုနှင့်အတူအသိပညာ၏လက်ရှိပြည်နယ်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
method ကို: (Anhedonia OR Deficiency ဆု) နှင့် ((မူးယစ်ဆေးမူတည် OR အလွဲသုံးမှု) OR ရက်သို့မဟုတ်နီကိုတင်း OR စွဲ OR လောင်းကစား OR (အင်တာနက်ကိုဂိမ်း)): တစ်ဦးက PubMed ရှာဖွေရေးအောက်ပါရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်။ သုံးဆယ်နှစ်ပါးဆောင်းပါးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: Anhedonia ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်, သူတို့ပြင်းထန်မှု comorbid စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူ DUS အတွက်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Anhedonia DUS ရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းတစ်ဦးရိုနှင့်ပြည်နယ်အတိုင်းအတာနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အဆိုး DUS ကုသမှုရလဒ်ကို impact လေ့စေနိုင်သည်။
keywords: အဆိုပါတ္ထုများအသုံးပြုခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, စွဲလမ်း, စိတ်ကျရောဂါ, ခံစားချက်ရောဂါ, လောင်းကစား, အင်တာနက်ဂိမ်းကစားအတွက် anhedonia, မမှန်
ကသတ်မှတ်အဖြစ်တ္ထုများ (DUS) ၏အသုံးပြုမှုအတွက် disorders စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ-5 (DSM-5) ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီတခုတခုအပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူမြင့်မားပျံ့နှံ့နေတဲ့ရောဂါအစုံ, ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကလူ့အဖွဲ့အစည်း (များမှာ1) ။ တစ်ဦး neuroscientific ရှုထောင့်ကနေ DUS ရှုပ်ထွေးမမှန်အဖြစ် conceptualized နိုင်ပါတယ်, ဆိုလိုသည်မှာမျိုးစုံလက္ခဏာပြွတ်နှင့်နောက်ခံ neurobiological circuitries / စနစ်များကိုတစ်ကဏ္ဍမှပါ။ ၎င်း၏အမာခံခုနှစ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါး-related လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု hypersensitivity နှင့်ဤ Impulses သတင်းပို့ကျော် (အလုပ်အမှုဆောင်) ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုချို့ယွင်းနှစ်ဦးစလုံးအိပ်လေ၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုရောဂါဖြစ်စဉ်များအဖြစ်တိုးတစ်ခုကဦးနှောက်-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏တိုး, ချို့ယွင်းစိတ်ဖိစီးမှုသည်းခံစိတ်, အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ရှိရာတစ်ဦး "မှောင်" ဘေးထွက်အကြံပြုထားသည်နှင့် anhedonia (အထက်လက်ယူ2).
သဘာဝကျကျကြိုးဖြစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများအတွက်လက်တွေ့ရှုထောင့်, anhedonia, ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးသိသိသာသာလျော့နည်းသွားအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အပျြောအပါးကနေ, များစွာသောစွဲတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့မရှိမဖြစ်ဝိသေသဖြစ်ပါတယ်။ Anhedonia ကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာ, တက်ကြွနာတာရှည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အခြေအနေတွင်သတင်းပေးပို့ (ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ) ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် abstinence စဉ်အတွင်းပါပြီ။ ဒါ့အပြင် anhedonia အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအဘို့, ပစ္စည်းဥစ္စာစတင်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှင့်စွဲဖို့နောက်ဆက်တွဲဖှံ့ဖွိုးတိုးအကူးအပြောင်း (များအတွက် Pre-တည်ဆဲအားနည်းချက်အဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါ3) ။ anhedonia characterizing အဆိုပါရောဂါလက္ခဏာတွေအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့် drives တွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်နှင့် neurochemical ရုပ်ပုံဦးနှောက်-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ dysregulation ကလွှမ်းမိုးသည်အဘယ်မှာရှိပုံမှန်အားဖြင့်စွဲလမ်း၏ "မှောင်မိုက်ဘက်" နဲ့ဆက်စပ်နောက်ခံ neurochemical အပြောင်းအလဲ, (ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ2) ။ ဤရွေ့ကားလည်း (နာတာရှည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အခြေအနေတွင်သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့် anhedonia နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်း Peripheral ရောင်ရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်နိုင်ပါသည်4) ။ ဒီလိုင်းအတွက်စိတ်မကျဆေး Antidepressants, ဆိုလိုသည်မှာ, agomelatine, ဖြစ်နိုင်သည်, anhedonia ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါညွှန်ပြမကြာသေးမီကလေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှာ မှတဆင့် (C-reactive protein လျော့ကျလာခြင်းနှင့် BDNF သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်5-7) ။ ထို့အပွငျ anhedonia ရလဒ်ကိုနှင့်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုအဘို့, တိကျတဲ့လက်တွေ့အရေးပါမှု, ဆိုလိုသည်မှာနိုင်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ် anhedonia (relapse များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်တဏှာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်3).
DUS ၏ဝိသေသကိုအခြားစိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူ comorbidity ၏မြင့်ပျံ့နှံ့သည်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော DSM နှင့် ICD အဖြစ်လက်ရှိအသုံးပြုသောအဖြေရှာတဲ့အမျိုးအစားစနစ်များကိုမှမွေးရာပါအဆိုပါရောဂါရှာဖွေမရေရာမှုများရဲ့ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဘုံအခြေခံအချက်များ (comorbidity ၏စာရင်းအင်းမြင့်မားတစ်ဦးအမူအကျင့်အဆင့်ရလဒ်များကိုပေါ်တွင် "အမျိုးအစား" ရောဂါအခါကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်-phenotypical တင်ပြချက်များကိုမောင်းစေခြင်းငှါ8) ။ ခံစားချက်၏ disorders (MD) DUS နှင့်အတူမကြာခဏပူးတွဲဖြစ်ပေါ်အစီရင်ခံခဲ့ကြသောစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏တဦးတည်းခံစားချက်မမှန် (MD) ဖြစ်ကြ၏။ အခြားအခွအေနေပစ္စုပ္ပန်အခါ MD နဲ့ DUS ၏ Co-ဖြစ်ပျက်မှုကောင်းစွာတခုက MD ရှိခြင်း၏လေးသာမှုအတွက်ငါးဆအထိတိုးမြှင့်ဖို့ခန့်မှန်းခြေ two- နှင့်အတူထူထောင်ခဲ့ပြီး (9) ။ စိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ pathogenesis မှလေးစားမှုနှင့်အတူ, anhedonia (ဥပမာစိတ်ဓါတ်များမမှန်, schizophrenia နှင့်လည်း DUS, ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ရောဂါ၏ phenotypic အယူအဆအတွင်းမှာ transdiagnostic ဝိသေသတစ်ခုကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီး10) ။ မကြာမီကလေ့လာမှုများ (ရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါအတွင်းဆုလာဘ် hyposensitivity အများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန် hedonic လိုငွေပြမှုနှိုင်းယှဉ်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ anhedonia တစ်ပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု11, 12) ။ ဒီရှုထောင့်ကနေတစ်ခုကိုတစ်ခုနောက်ခံ neurobiological Construction အဖြစ် anhedonia အဆိုပါ DUS-စိတ်ကျရောဂါ comorbidity ၏မြင့်ပျံ့နှံ့ရှင်းပြနေတဲ့ယာဉ်မောင်းအဖြစ်ပြုမူသည်ဟုတွေးဆနိုင်ပါသည်။ တနည်းအား anhedonia နာတာရှည်ပစ္စည်းဥစ္စာ (ab) ကိုအသုံးပြုခြင်း၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ဆင်း-စည်းမျဉ်း၏ရလဒ်အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးရောဂါအတွင်းလက္ခဏာသို့သော်၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကွဲပြားခြားနားသော pathogenetic လမ်းကြောင်းအပေါ်အခြေခံပြီးသော၏, ဥပမာ anhedonia ဖြစ်လိမ့်မယ်။
Anhedonia ဝေးနေဖြင့် DUS နှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်အကြား comorbidities အခြေခံတစ်ခုတည်းသောဘုံ Construction မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်မှာထိုသုတေသနဒိုမိန်းစံနှုန်း (RDoC) ဝေါဟာရများ, ခြိမ်းခြောက်မှု-related လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လိုငွေပြမှု (အပျက်သဘောဆောင်သော valence စနစ်များ), အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု (arousal / စည်းမျဉ်းစနစ်များ) နှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် (သိမှုစနစ်များ) ကို အသုံးပြု. နှစ်ဦးစလုံးသည် "အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်အနှံ့ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည် "ရောင်စဉ်တွေ (ဥပမာ, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်) နှင့်" externalizing "ရောင်စဉ် internalizing, ဆိုလိုသည်မှာ, DUS (8, 11) ။ သို့သော်ယခုတက်အတွက် anhedonia ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစိတ်ဓါတ်များမမှန်နှင့်အတူစွဲနှင့် comorbidity အတွက် pathogenesis နှစ်ဦးစလုံးသည်အဓိကအားဖြင့် understudied ကျန်ရစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတိုးပွားလာကြောင်း anhedonia ညွှန်ပြကတည်းကဒါဟာဥပမာတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်အတွက်အသိပေးချက်ဖြစ်ပါသည်, စိတ်ကျရောဂါ၏ဆက်စပ်အတွင်း, ထိုအပျက်သဘောသက်ရောက်မှုကုသမှုရလဒ်ကိုအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် anhedonia (pharmacological ကုသမှုအပေါ်အဓိကစိတ်ကျရောဂါ, Suicide နှင့်သတ်သေ ideation လက္ခဏာတွေဆင်းရဲ longitudinal သင်တန်းနှင့်ဆင်းရဲသောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခန့်မှန်းဖြစ်ပါသည်13-16).
anhedonia conceptualizing နှင့်အကဲဖြတ်ပေါ်မှာဤသုံးသပ်ချက်ကို၏အတိုင်းအတာအတွင်းမှာပဲကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ။ Next ကိုကျနော်တို့ anhedonia နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ကြားဆက်ဆံရေးရှာဖွေစူးစမ်းစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ ဆွေးနွေးမှုမှာကျနော်တို့ anhedonia နှင့်မည်သို့ဒီအပေါ်လက်ရှိသဘောတရားများနှင့်အတူဤအတွေ့ရှိချက်ကိုက်ညီမည်သို့ချဲ့ထွင်, အလားအလာ, ကုသမှုနှင့်အနာဂတ်သုတေသနအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်။
Anhedonia သဘာဝအားဖြင့်သို့မဟုတ်ယခင်ကကြိုးအဖြစ်ကိုရိပ်မိဖြစ်စေဖြစ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်သည့်လျော့နည်းသွားအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အပျြောအပါးကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, anhedonia မူလကပင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု၏အာရုံခံထောက်လှမ်း, အကျိုးသက်ရောက်စေ hedonic တုံ့ပြန်မှု, အပျြောအပါးသူ့ဟာသူ (အကြိုက်), ထိုသို့အကျိုးကိုနှင့်အလုပ်ရရှိရန်လှုံ့ဆျောမှု (လိုသော: ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များစမ်းသပ်ထားသည့်ခွဲဖြာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဖွယ်ရှိအစစ်အမှန်ဘဝ-အခြေအနေများတွင် intermingled ဖြစ်ကြောင်းမျိုးစုံအစိတ်အပိုင်းများကပါဝင်ပတ်သက် သို့မဟုတ်မက်လုံးပေး salience), နှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ (17).
anhedonia အခြေခံအနည်းဆုံးနှစ်ခုကျယ်ပြန့်ရှုထောင့်တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့သုတေသနမှတဆင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ: 1) ဆုလာဘ် hyposensitivity နှင့် 2) ချဉ်းကပ်မှုလှုံ့ဆျောမှုလျှော့ချ။ အရေးပါမှု၏, နှစ်ဦးစလုံးရှုထောင့်ကသူတို့နောက်ခံ neurobiological လမ်းကြောင်းနှင့် neurochemical ထူးခြားချက် (နှင့်စပ်လျဉ်းခွဲဖြာနိုင်ပါတယ်11).
ဆုလာဘ် hyposensitivity မကြာခဏအသုံးအနှုန်းအားဖြင့်ထင်ဟပ်, ဆိုလိုသည်မှာ, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ "သူတွေရဲ့စားသောက်" စိတျအပိုငျးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့အကြံပြုထားပါတယ် "ကြိုက်တယ်။ " ပျော်ရွှင်မှုအတှေ့အကွုံကွဲပြားခြားနားအတွက် endogenous opioid နှင့် endocannabinoid အဲဒီ receptor လမ်းကြောင်းကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့အကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ် ဦးနှောက်ဧရိယာများ (18) ။ ဤအစိတ်အပိုင်း "hedonic anhedonia ။ " ဆိုလိုသည်မှာ anhedonia ၏ hedonic အတိုင်းအတာကိုခေါ်နိုင်
ချဉ်းကပ်နည်းလှုံ့ဆျောမှုဆုလာဘ်ရရှိရန်ချဉ်းကပ်မှုသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောယာဉ်မောင်းအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ အဆိုပါ mesolimbic သည့်စနစ်အတွင်း dopaminergic ဂီယာအားဖြင့် encoded သတင်းအချက်အလက် (ဆုလာဘ်စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်17) ။ အဆိုပါမူလတန်းစနစ်အ dopaminergic frontostriatal circuitries ဖြစ်အဆိုပြုထားသည်။ dopaminergic လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလျှော့ချကိုလိုက်နဲ့ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုတခုတခုအပေါ်မှာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအတိုင်းအတာ anhedonia များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်း, ဆိုလိုသည်မှာခေါ်နိုင် "စိတ်ခွန်အားနိုး anhedonia ။ " အတိုး၏, တစ်ဦး dopamine agonist (ဃ-amfetamine) ၏စီမံခန့်ခွဲမှု (တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ဆုလာဘ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်တစ်ခုတိုးထုတ်လုပ်11, 19).
အမူအကျင့်, Self-အစီရင်ခံစာထံမှသက်သေအထောက်အထားကြီးထွားလာအတူတကွခေါ်ဆောင်သွားနှင့် neurophysiological လေ့လာမှုများဆုလာဘ် hyposensitivity နှင့်လျှော့ချချဉ်းကပ်လှုံ့ဆျောမှု (anhedonia ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြု11) ။ ဆုလာဘ်-related ပြည်နယ်များတွေးဆနိုင်ပါတယ် (; hedonic (ဆိုလိုသည်မှာ endogenous opioids အချက်ပြနှင့်ဆက်နွယ်စားသုံးမှု, like နှိပ်) သာရှိပြီးပြည်ပမှ; ဒီရှုထောင့်ကနေနှစ်ခုကွဲပြားအာရုံကြောဆားကစ်နောက်ခံစိတ်ခွန်အားနိုး (ဆိုလိုသည်မှာယင်း frontostriatal circuitry အတွင်းအချက်ပြ dopamine နဲ့ဆက်စပ်မျှော်လင့်, လိုသော)11) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအဘို့, အဲဒီနှစ်ဦးကိုအခြေခံရှုထောင့် (ရန် anhedonia conceptualize ပုံ 1 ).
Anhedonia အတိုင်းအတာ (11, 18).
လူ့ DUS တစ်ဦးချင်းစီအတွင်း anhedonia ၏ပျံ့နှံ့မှုကဘာလဲ?
anhedonia ၏တိုင်းတာခြင်းတူရိယာ၏အဘယျအမျိုးအစားများ DUS နမူနာအတွင်းလူ့လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုနေကြသနည်း
လှုံ့ဆျောမှု anhedonia နှိုင်းယှဉ် hedonic သည်နှင့်အညီတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါသလား?
ဘယ်လို anhedonia DUS-စိတ်ကျရောဂါ comorbidity ဆက်စပ်သလဲ,
DUS သင်တန်းနှင့်ကုသမှုတုံ့ပြန် anhedonia ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ?
လတ်တလောစနစ်တကျပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားစပ်လျဉ်းအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ် (Sud) နှင့် anhedonia 23 မေလ 2013 ဖို့စာပေကိုတက်ပြန်လည်သုံးသပ် (3) ။ ဒါကြောင့်ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုနှင့်အတူကျနော်တို့နောက်ဆုံး5နှစ်ဆိုလိုသည်မှာဤရက်စွဲပြီးနောက်ထုတ်ဝေသောစာပေပြန်လည်သုံးသပ်နေဖြင့်အလုပ်၏ဤခန္ဓာကိုယ်တိုးချဲ့ရည်ရွယ်။ တစ်ဦးကရှာဖွေရေးဒီအဆုံးစွန်သောထုတ်ဝေ (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့တူညီရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြု. PubMed အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်3) ။ သူတို့မကြာသေးမီက၏ DUS မျြးအခနျးကွီးတှငျပါဝငျခဲ့ကြသောကြောင့်, ကျနော်တို့ကဒီရှာဖွေရေးအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားပါဝင်သည် DSM-5 စွဲလမ်းမမှန်အဖြစ် (နှင့်နောက်လာမည့် ICD11 ၌ဖြစ်လိမ့်မည်) ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဆောင်းပါးများကိုအဘို့အ anhedonia နှင့် DUS အကြား link ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမူရင်းလေ့လာမှုများ, တစ်ဦး PubMed ရှာဖွေရေး (မေ 2013-နိုဝင်ဘာလ 2018) ရရှိရန်အလို့ငှာအောက်ပါရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်ခုနှစ်တွင်: (Anhedonia OR Deficiency ဆု) နှင့် ((မူးယစ်ဆေးမူတည် OR အလွဲသုံးမှု) OR ရက်သို့မဟုတ်နီကိုတင်း OR စွဲ OR လောင်းကစား OR (အင်တာနက်ကိုဂိမ်း)) ။ အဆိုပါစာတမ်းများသာလူ့လေ့လာမှုများအဘို့အ filtered ခဲ့ကြသည်။ ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ခြုံငုံသုံးသပ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် ပုံ2။ အဆိုပါ PubMed ရှာဖွေရေး 171 ရလဒ်များ; စိတ္တဇစိစစ် 136 စာတမ်းများထွက်ခွာ 35 စာတမ်းများ၏ဖယ်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဤအရာတစျခုအပြည့်အဝစက္ကူပြန်ထုတ်မရနိုင်, နှစ်ယောက် validation ကိုလေ့လာမှုများဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်, ဒါ 32 ဆောင်းပါးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
လေ့လာမှုအများစု (n = 13) (အရက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်n = 4), ဆေးခြောက် (n = 4), ကိုကင်း (n = 5), benzodiazepines (n = 1), နှင့် opioids (n = 4) ။ အမူအကျင့်စွဲလမ်း, ဆိုလိုသည်မှာ, အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားအပေါ်လောင်းကစားဝိုင်းအဘယ်သူမျှမအပေါ်တဦးတည်းလေ့လာမှုညံ့ဖျင်းလေ့လာခဲ့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ မြင် စားပွဲတင် 1 အားလုံးလေ့လာမှုများခြုံငုံသုံးသပ်ပါ။
အရက် (20) MDD (n = 4,339)
MDD + AUD (n = 413) MINI / / MDD Anhedonia အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
(21) စိတ်ဒဏ်ရာ-ထိတွေ့အမေရိကန်စစ်ဘက်စစ်ပြန် (n = 913) PCL-5 / / PTSD ရောဂါလက္ခဏာ အတိတ်နှစ်အရက်အကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ် Anhedonia
(22) 18 နှစ်ဟစ်စပန်းနစ်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်မှ 25- (n = 181) CES-D ကို / / / anhedonia ၏အဆင့်မြင့်မြင့်မားတဲ့အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြ
(23) ကောလိပ်ကျောင်းသားများက (18-22 နှစ်ပေါင်း) (n = 820) MASQ-SF / fMRI သင်တန်းသားများကို ventral striatum reactivity ကို elicits သောကဒ်-နောက်ဆုံးတွင်ခန့်မှန်းတာဝန်, ပြီးစီးခဲ့စဉ် / ဆုလာဘ်လျှော့ချ ventral striatum reactivity ကိုအစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့တစ်ဦးချင်းစီအတွက် anhedonia များအတွက်တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထိုသို့သောစိတ်ဖိစီးမှု-related anhedonia ပြဿနာအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
နီကိုတင်း (24) non-နေ့စဉ်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများ (18-24 နှစ်ပေါင်း) (n = 518): 1m ထက်6/ မီတာထက်ပိုပိုပြီးဆေးလိပ် SHAPS အွန်လိုင်း 3,6နှင့်9လအကြာအတိုင်းလိုက်နာ-up, / / / Anhedonia သည်အခြားဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မဟုတ်ပါဘူး (OTP) ကိုသုံးပေမယ့် anhedonia ရှိသူများကပိုမကြာခဏတမာကူကိုအသုံးပြု
(25 တစ်ဦးဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်လူကြီးများ (n = 1,122), မိ 10 sig / ဃမိ6မီတာ: ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (n = 131), bupropion (n = 401), သို့မဟုတ် NRT (n = 590) ဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ်ပစ်မှတ်နေ့ကနုတ်ထွက်ကြိုတင်နှင့်4ရက်အကြာမှာ5ရက်ပေါင်းကြိမ်တစ်နေ့လျှင် 10 / / / Anhedonia မှီခိုနှင့်ဆက်စပ်သည်နှင့် agonist အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နှိမ်နင်းခဲ့သည်
(26) နဝမတန်းကျောင်းသားများကို (13-15 နှစ်ပေါင်း) (n = 3299): အစဉ်အဆက်-ဆေးလိပ်သောက်သူများ (n = 343), ဘယ်တော့မှ-ဆေးလိပ်သောက်သူများ (n = 2,956) SHAPS / / / Anhedonia အဆိုပါ subsample အတွက်ခြုံငုံနမူနာများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားစတင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဘယ်တော့မှ-ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆေးလိပ်သောက်စတင်နှင့်ဆက်စပ်သည်
(27) non-ကုသမှု-ရှာကြံဆေးလိပ်သောက်သူများ (10 နှစ်ပေါင်းထက်ပို2sig / ဃထက်ပို) (n = 125 တက်ရောက်ခြင်း 2) စမ်းသပ်အစည်းအဝေးများ abstinent အဘယ်သူအားမျှ vs. (16 ဇများအတွက် abstinent ()) counterbalanced SHAPS ရုပ်ပုံခဲ့သည် Rating Task ကို / / အနုတ်လက္ခဏာဓါတ်ပုံတွေကိုလျော့နည်းအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် reactivity ကိုနဲ့ဆက်စပ် သာ. ကွီးမွတျ anhedonia
(28) တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်းချုပ်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်မှု (ထဲမှာ Smoking သင်တန်းသားများn = 1,236): နီကိုတင်း patch ကို (n = 216), နီကိုတင်း lozenge (n = 211), bupropion (n = 213), patch ကို + lozenge (n = 228), bupropion + lozenge (n = 221), ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (n = 147) ဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ်ပစ်မှတ်နေ့ကနုတ်ထွက်ကြိုတင်နှင့်4ရက်အကြာမှာ5ရက်ပေါင်းကြိမ်တစ်နေ့လျှင် 10 / / / မြင့်မားသောတဏှာ anhedonia အုပ်စုအဆင့်မြင့်မှီခိုအစီရင်ခံပေါင်းစပ်နီကိုတင်းအစားထိုးရရှိထားရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်, နိမ့်တပတ် 8 abstinence နှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ပြန်ရောက်သွားတယ်
(29) ဆေးလိပ်သောက်သူများ (5 sig / ဃထက်ပို) (n = 1125) MASQ-S က / / / အရေးတကြီး anhedonia ၏ပျှမ်းမျှသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်မှာဆေးလိပ်သောက်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ၏ အနည်းငယ် anhedonia လက္ခဏာတွေထောက်ခံခဲ့ကြသည့်အခါသူကဆေးလိပ်မသောက်ရန်သက်ဆိုင်တဲ့ခဲ့သည်
(30) အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးလိပ်သောက် (n 525 မီလီဂရမ် / နေ့နီကိုတင်း patch ကိုကုထုံးအပေါ်တစ်ဦးရပ်နားခြင်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကနေ = 10) (21 / ဃထက်ပို) 8 ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ SHAPS / / / 70 ပါဝင်သူ (13%) anhedonic ခဲ့ကြသည်, ယောက်ျားကပို anhedonic ခဲ့ကြသည်, anhedonic ဆေးလိပ်သောက် abstinent ဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏
(31) နဝမတန်းကျောင်းသားများကို (n = 807):
294 Sud, ဆေးရွက်ကြီးမရှိဘဲမူးယစ်ဆေးဝါး / အရက်သေစာအသုံးပြုမှု 166 တစ်သက်တာသမိုင်း, ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါး / အရက်သေစာအသုံးပြုမှု 115 တစ်သက်တာသမိုင်းမရှိသမိုင်း SHAPS / / / ဆေးရွက်ကြီးမပါဘဲတစ်သက်တာအရက် / မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ပိုမိုမြင့်မား anhedonia ခဲ့
(32) နဝမတန်းကျောင်းသားများကို (n = 3,310): 2,557 သမားရိုးကျမဟုတ်မက e-စီးကရက်သာ 412 က e-စီးကရက်, သာ, 152 သမားရိုးကျနှင့် e-စီးကရက် 189 သမားရိုးကျစီးကရက် SHAPS / / / Anhedonia သာ Non-အသုံးပြုသူများအ vs. က e-စီးကရက်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ Non-အသုံးပြုမှု anhedonia အဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်သာ vs. က e-စီးကရက်အသုံးပြုမှု vs. Dual-အသုံးပြုမှုတစ်ခုအမိန့်ထုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှု
(33) MDD သို့မဟုတ် dysthymia နှင့်အတူစစ်ပြန် (n = 80): 36 ဆေးလိပ်သောက်စိတ်ကျရောဂါနှင့် 44 Non-ဆေးလိပ်သောက်စိတ်ကျရောဂါ MASQ-S က
bis / BAS ဆုလာဘ်-သင်ယူမှုကိုတိုင်းတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ်အလုပ်တခုကို / MDD-dysthymia စိတ်ဓာတ်ကျဆေးလိပ်သောက်ပိုမိုမြင့်မားရို anhedonia အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် Non-ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ BAS ဆုလာဘ်တုန့်ပြန်မှုကိုလျှော့ချ။ စိတ်ဓာတ်ကျဆေးလိပ်သောက်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှုပိုမိုဝယ်ယူသရုပ်ပြ
(34) ရပ်နားခြင်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုဆေးလိပ်ထံမှလူကြီးများ (n = 1,175) (မိ 10 sig / ဃနောက်ဆုံး6လအတွင်း): bupropion, နီကိုတင်း lozenge, နီကိုတင်း patch ကို + lozenge, bupropion + နီကိုတင်း lozenge သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ ပစ်မှတ်နေ့ကနုတ်ထွက်ပြီးနောက်ဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ်ကြိုတင်4ရက်5လက်ထက် မှစ. ကြိမ်တစ်နေ့လျှင် 10 / / / Anhedonia ဆေးရွက်ကြီးချုပ်ရာမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခု inverted U- ပုံစံပြဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေနှင့်ဆေးရွက်ကြီးမှီခို၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ post-နုတ်ထွက် anhedonia နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ပြန်သွားကြသည်နှင့်အနိမ့် 8-ရက်သတ္တပတ်အမှတ်ပျံ့နှံ့ abstinence နှင့်အတူဖို့အောင်းနေချိန်လျော့နည်းသွားသည်။ NRT abstinence-related anhedonia အတွက်တိုးနှိမ်နင်း
(35) အရွယ်ရောက်ပြီးသူစုဆောင်း မှတဆင့် ကြေညာချက်များ (n = 275) (10 sig / ဃထက်ပို): သင်တန်းသားများကို abstinence နှင့် Non-abstinent ဆေးလိပ်2ဇပြီးနောက်လည်ပတ်မှု counterbalanced 16 အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် anhedonia ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအလည်အပတ်ခရီးတက်ရောက်ခဲ့သည် SHS
Cai ဆေးလိပ်သောက်၏ဆွေမျိုးဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာမူအကျင့်ဆေးလိပ်သောက်အလုပ်တခုကို / / ပိုမိုမြင့်မားသော anhedonia မြန်ဆေးလိပ်သောက်စတင်ဟောကိန်းထုတ်နှင့်ပိုပြီးစီးကရက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနိမ့်နှင့်မြင့်မားသောအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ပြည်နယ်များကကမကထပြုခဲ့, ဝယ်ယူခဲ့သည်။ Abstinence ရာ anhedonia စီးကရက်အဆိုပါ abstinence ကိုင်တွယ်တုန့်ပြန်သောသူတို့တွင်စားသုံးမှု, ဒါပေမယ့်မပေးတစ်ခုလုံးကိုနမူနာဟောကိန်းထုတ်ဖို့အတိုင်းအတာ amplified
(36) တစ်ဦးဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းကုသမှုလေ့လာမှု (စာရင်းသွင်းဆေးလိပ်သောက်သူများn = 1,469) (10 မီတာထက်6ထက်ပို sig / ဃပိုပြီး): bupropion (n = 264), နီကိုတင်း lozenge (n = 260), နီကိုတင်း patch ကို (n = 262), bupropion + lozenge (n = 262), ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (n = 189) ဘဝကအချိန် anhedonia မှတဆင့် CIDI / / စိတ်ကျရောဂါ Anhedonia ရပ်နားခြင်းရလဒ်ကိုခန့်မှန်း
ဆေးခြောက် (37) 15 နှင့် 24 နှစ်အကြားဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများက (n = 162): 47 အစောပိုင်းစတင်ခြင်း, 16 နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီ; 115 နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခြင်း အွန်လိုင်း OLIFE / / Schizotypy အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းသာအမျိုးသမီးအတွက် anhedonia ၏အဆင့်မြင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်
(32) 14 ၏အသက်အရွယ်မှာကျောင်းသား (n = 3,394) အခြေခံမှာ 6-, 12- နှင့် 18 လနောက်ဆက်တွဲ SHAPS / / / Anhedonia ဆေးခြောက်-သုံးပြီးမိတ်ဆွေတွေကိုအားဖြင့် amplified နောက်ဆက်တွဲဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းတင်းမာမှုနဲ့ဆက်စပ်ပေမယ့်အခြေခံဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း anhedonia အတွက်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းမှဆက်စပ်မရဖြစ်ပါတယ်။
(38) 20 နှစ်အရွယ်ယောက်ျား (n 158-6 မီတာ၏အသက်အရွယ်မှာစုဆောင်း = 17), SHAPS / ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းတုံ့ပြန်အကဲဖြတ်ထားပါသည်တစ် 24-ရုံးတင်စစ်ဆေးနှေးကွေးဖြစ်ရပ်-related ကဒ်-နောက်ဆုံးတွင်ခန့်မှန်းကစားပွဲစဉ်အတွင်း fMRI အဆိုပါမြင့်တက်လမ်းကြောင်းအုပ်စုတစ်စု anhedonia ၏အဆင့်မြင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့အနုတ်လက္ခဏာ NACC-mPFC ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပုံစံပြသ
(39) အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းကနေ MDD အဖွဲ့ခွဲ (n = 2,348): CUD မပါဘဲ CUD vs. အသုံးပြုသူများနှင့်အသုံးပြုသူများသည် DSM-IV စံ / / MDD ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှု level anhedonia နှင့်ဆက်စပ်နေသည်
စိတ်ကြွဆေး (19) ကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူကုသမှု-ရှာကြံလူကြီးများ: အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် (n = 85): 40 ရလဒ်များအရအိပ်ယာ, 45 levodopa SHAPS PR စနစ်လုပ်ငန်းတာဝန် / / L-dopa CM ၏ရလဒ်များကိုတိုးတက်စေရ, မ anhedonia အားဖြင့်တည်းဖြတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုခဲ့ဘဲ, anhedonia CM ၏ဆင်းရဲတဲ့ရလဒ်ကိုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ ပြင်ဆင်. တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်ဖြစ်နိုင်သည်
(40) CUD ပါဝင်သူ (n = 46) CSSA / ERP ၏ RewP / RewP anhedonia ဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့် anhedonia အဆိုပါ RewP လွှဲခွင်ထဲမှာကှဲလှဲတဲ့သိသိသာသာငွေပမာဏကိုရှင်းပြ
(41) လက်ရှိကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများ (n = 23) နှင့်မျှမကမူးယစ်ဆေးဝါးသမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူသင်တန်းသားများကို (n = 24) SHAPS / ဆုလာဘ်လက်ခံရရှိပြီးနောက် ERP / Anhedonia ဆုလာဘ်လှုံ့ဆျောမှု, လျော့နည်းသွားဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်လျော့နည်းသွားစောင့်ကြည့်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
(42) လက်ရှိကင်းချိုးဖောက်မှုများ, ပြင်ပလူနာ (n = 23) နှင့်မျှမကမူးယစ်ဆေးဝါးသမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှု (n = 27) SHAPS
CPCSAS / EEG မှတ်တမ်းတင်ထားသောနေစဉ် / NoGo တာဝန်သွားပါ။ နိုင်ငံတကာကိုထိခိုက်ရုပ်ပုံစနစ်ကနေ valence ဓာတ်ပုံများကို / ကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုညံ့ဖျင်းသည့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုထက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများကိုပိုမို anhedonic ခဲ့ကြသည်။ anhedonia ၏အဆင့်မြင့်ပိုပြီးပြင်းထန်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ inhibitor ထိန်းချုပ်မှုနှင့် anhedonia သာထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်
(43) ပြီးခဲ့သည့်3ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာကိုကင်းကနေအခမဲ့ကင်း-မှီခိုလူနာ, (n = 23) နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (n = 38) (ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ anhedonia နှင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောလူမှုရေး anhedonia နှင့်အတူ) ချပ်မန်းစိတ္တ-ကျရောက်နေတဲ့အကြေးခွံ / သုံးနှစ်လယ်ပိုင်းအောင်းနေချိန်အာရုံထုတ်ယူနိုင်ရန်တစ်ဦးကတွဲ-လှုံ့ဆော်မှုပါရာဒိုင်းတုံ့ပြန်မှု (MLAER), အမည်ရ, P50, N100 နှင့် P200 evoked စိတ္တကျရောက်နေတဲ့ လူမှု anhedonia ရမှတ် P200 မြို့တံခါးဝ၌ကှဲလှဲ၏အကြီးဆုံးအချိုးအစားအဘို့မှတ်။ ဆင်းရဲတဲ့ P50 Gates ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်လူမှုရေး anhedonia စကေးအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များနှင့်ကင်း-မှီခိုလူနာရောထွေးနမူနာကိုဖြတ်ပြီး related ဖြစ်ပါတယ်
Opioids (44) opioid ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်ဘိန်းဖြူ-မှီခိုပါဝင်သူ (n = 90): methadone အပေါ် (n = 55) သို့မဟုတ် buprenorphine အပေါ် (n = 35); opioid-မှီခိုပါဝင်သူ ((12 လအထိ) နှင့်မကြာသေးမီက abstinentn = 31);
ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (n = 33) SHAPS
TEPS / / / opioid-မှီခိုသင်တန်းသားများအတွက် anhedonia အတွက်မြင့်တက်
(45) opioid မှီခိုနှင့်အတူလူနာ (အများအားဖြင့်အတွင်းလူနာ) (n = 306): 1,000 naltrexone implants + ပါးစပ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (MGn = 102), ရလဒ်များအရအိပ်ယာ implants နဲ့ 50 မီလီဂရမ်ပါးစပ် naltrexone (n = 102), နှစ်ဦးစလုံးရလဒ်များအရအိပ်ယာ (n = 102) Fas
CSPSA / / / Anhedonia အခြေခံမှာခြီးမွှောနှင့်ကုသမှုထဲမှာကျန်ရစ်နှင့်ပြန်သွားကြသည်ခဲ့ပါဘူးသူကိုလူနာတွေအတွက်ပထမဦးဆုံး 1-2 လအတွင်းပုံမှန်လျှော့ချ, အုပ်စုများအကြားမျှခြားနားချက်ခဲ့သည်
(46) 10-14 ရက်ပေါင်းဆုတ်ခွာ (PODP) ပြီးနောက် Opioid-မှီခိုလူနာ (n = 36) နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (n = 10) SHAPS အကျိုးသက်ရောက်စေ-modulated ထိတ်လန့်တုန့်ပြန် (AMSR) ပါဝင်သူရဲ့ RPFC နှင့် VLPFC အလုပ်လုပ်တဲ့အနီး-အနီအောက်ရောင်ခြည် spectroscopy နှင့်အတူစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရသောကာလအတွင်း Cue reactivity ကိုတာဝန် / PODP, Self-အစီရင်ခံစာအပေါ် သာ. ကြီးမြတ် anhedonia အစီရင်ခံတင်ပြသည့် AMSR တာဝန်အတွက်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုမှ hedonic တုံ့ပြန်မှုလျှော့ချနှစ်နိုင်ငံ RPFC လျှော့ချနှင့်အစားအစာပုံရိပ်တွေမှ VLPFC လှုပ်ရှားမှု left နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြုသဘောလူမှုရေးအခြေအနေများမှလက်ဝဲ VLPFC လျှော့ချ။ anhedonia နှင့်အတူလူနာအပြုသဘောလူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အစားအစာမှလျှော့တုံ့ပြန်မှုပြသ
(47) စွဲ-ကုသမှုစင်တာများအနေဖြင့်စုဆောင်း Detoxified ဘိန်းဖြူ-မှီခိုလူနာ (n တိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန် naltrexone (XRNT) နှင့်ကျန်းမာဘာသာရပ်များ ( စတင်. detoxification ပြီးနောက် = 12)2ရက်သတ္တပတ်n = 11) SHAPS / [123ကျွန်မ] လက်ဗွေ-cit SPECT-scan ကပုံရိပ် striatal DAT binding: XRNT နှင့်အတူဆေးထိုးပြီးနောက် 1 မီနှင့် 12ရက်သတ္တပတ် / XRNT anhedonia ထိခိုက်စေပေမယ့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေသိသိသာသာလျှော့ချရေးနှငျ့အတူမထားဘူး
လောင်းကစား (48) ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူပြင်ပလူနာ (n = 154): 34 11 ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG) ၏စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်သောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ (ICD) အတွက်စံ, မပြည့်စုံ SHAPS / / ပါကင်ဆန်ရောဂါ PG anhedonia တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့
အင်တာနက်ကဂိမ်းကစားခြင်း / / / / / /
Benzodiazepines (49) အဆိုပါ MDPU ဒေတာဘေ့စ (စိတ်မူမမှန် Psychopharmacology ယူနစ်) ၏ MDD ပြင်ပလူနာ (n = 326): 79 benzodiazepine သုံးစွဲသူများ 247 nonbenzodiazepine အသုံးပြုသူများသည် Madre / / MDD Anhedonia အဆိုပါ benzodiazepine အုပ်စုကြီးနှင့် anhedonia ပုံမှန်အစည်းအဝေး benzodiazepine အသုံးပြုမှုအင်အားအကောင်းဆုံးခန့်မှန်းခဲ့သည်
OLIFE, Feeling နှင့်အတွေ့အကြုံများ၏အောက်စဖို့-125 လီဗာပူးလ် Inventory; PCL-5 = DSM-5 များအတွက် PTSD စာရင်း; SHAPS, Snaith-Hamilton ကပျော်ရွှင်မှုစကေး; TEPS, ပျော်ရွှင်မှုစကေး၏ယာယီအတွေ့အကြုံ; REI, အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောပွဲများ Inventory; CES-D ကို, Center က epidemiological လေ့လာရေးစီးပွားပျက်ကပ်စကေး; PR စနစ်လုပ်ငန်းတာဝန်, တိုးတက်သောအချိုးတာဝန်; Fas, ဖာဂူဆန် Anhedonia စကေး; CSPSA, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှု anhedonia ၏ချပ်မန်းစကေး; (Anhedonic စီးပွားပျက်ကပ် subscale နှင့်အတူ) MASQ-S က, Mood နှင့်တော့ပူပန်ရောဂါလက္ခဏာများမေးခွန်းလွှာ-က Short Form ကို; CSSA, ကင်းရွေးချယ်ပြင်းထန်မှုအကဲဖြတ်စကေး; RewP, အပြုသဘောအစိတ်အပိုင်း၌ဆပ်; TEPS, ပျော်ရွှင်မှုစကေး၏ယာယီအတွေ့အကြုံ; bis / BAS, အပြုအမူတားစီး / အပြုအမူ Activation စကေး; CPCSAS, ချပ်မန်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ချပ်မန်းလူမှု Anhedonia ကြေးခွံ; SHS, SUBJECT ပျော်ရွှင်မှုစကေး; Cai, Composite Anhedonia ညွှန်းကိန်း; MINI, Mini ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး; CIDI, Composite အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Diagnostic အင်တာဗျူး; Madre, Montgomery-Asberg စီးပွားပျက်ကပ်ခဲ့သည် Rating စကေး။
DUS လေ့လာရေးအတွင်းမှာပဲအသုံးပြု Anhedonia ၏ဆောင်ရွက်ချက်များအမျိုးအစားများ
self-အစီရင်ခံစာတင်းဝေးအသုံးပြုပုံအများဆုံးအသုံးပြုတူရိယာ, ဆိုလိုသည်မှာ, ရှိသမျှလေ့လာမှုများ Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ ဤအရာက, Snaith-Hamilton ကပျော်ရွှင်မှုစကေး (SHAPS) (50) အများဆုံးမကြာခဏ 15 လေ့လာမှု 32 အတွက်, ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါစိတ်ကျရောဂါသုတေသနအတွင်း, အ SHAPS အတည်ပြုခြင်းနှင့်ရွှေစံဖြစ်နေဆဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (ထိုသူတွေရဲ့စားသောက်ပျော်မွေ့တိုင်းတာ51) ထုံးစံအတိုင်း။ သို့သော်မည်သည့်စကေးသုံးစွဲဖို့ကြိုတင်အကျိုးစီးပွားများ၏လူဦးရေအတွက်အတည်ပြုသင့်ကြောင်းထောက်ခံချက်ပေးထားသောကြောင့်ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုမှာတွေ့ရတဲ့ Self-အစီရင်ခံစာအကြေးခွံအဘယ်သူအားမျှအစဉ်အဆက် DUS လူဦးရေအတွင်းအတည်ပြုခဲ့သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်လက်ရှိရလဒ်များအနက်အချက်ကိုခိုင်လုံမှု။
အကျိုးစီးပွား, သုံးလေ့လာမှုများတစ်ဦးဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာရုံးတင်စစ်ဆေး (လေးကြိမ်တစ်နေ့တာအတွင်းဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ် (EMAs) ကိုအသုံးပြု25, 28, 34) ။ ဒါဟာပါဝင်သူသုံး domains များ (လူမှုရေး, အပန်းဖြေခြင်း, စွမ်းဆောင်ရည် / အောင်မြင်ခြင်း) ရက်နေ့တွင်တစ်နေ့တာအတွင်းတွေ့ကြုံဘယ်လောက်ပျော်မွေ့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ EMA အလားအလာနည်းစနစ်ပိုကောင်း (နောက်ကြောင်းပြန်) Self-အစီရင်ခံစာထက်ရောဂါလက္ခဏာများ၏အမှန်တကယ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်ဒေတာပေးစေခြင်းငှါနှင့် ပို. ပို. (စိတ်ကျရောဂါနှင့်စွဲသုတေသနနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်52, 53) ။ သို့သော်သေးအဖြစ်, anhedonia အပေါ် EMA-အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်မေးခွန်းများကိုမရှိအတည်ပြုထားတီထွင်ခဲ့ကြသည်။
အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ (n = 4) အပြုအမူဆိုင်ရာတာဝန်များကိုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Guillot et al ။ အဆိုပါရုပ်ပုံခဲ့သည် Rating အပြုသဘောမှဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်စေ valence တစ်ဦးအတိုင်းအရှည်ဖြစ်သည့် Task ကို, အနုတ်လက္ခဏာနှင့်ဆေးလိပ်သောက်တွေကို (မသုံး27) ။ ဒီတာဝန်များတွင်ပါဝင်သူ3မှ -3 (အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်) (အလွန်သာယာသော) မှခုနစ်မှတ် Likert စကေးမှသက်ဆိုင်ရာသော့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီလှုံ့ဆော်မှု၏သာယာသောဘယ်လောက်ရှိသလဲရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အပြုသဘော, အပျက်သဘော, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, ကြားနေပုံရိပ်တွေကိုပြသထားပါသည်။ ဒီတာဝန်အတွက်, anhedonia ပြောင်းပြန်အပြုသဘောသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှု၏ ratings pleasantness နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသည်း et al ။ (33) (ပြီးသား MDD နှင့်စိတ်ကြွရောဂါနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်အပြုအမူမော်ဂျူအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ signal ကိုထောက်လှမ်းတာဝန်သုံး54) ။ အဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုများမှာတော့တုံ့ပြန်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့် anhedonia အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေးပြီးသားသရုပ်ပြခဲ့သည်။
Leventhal et al ။ (ဆေးလိပ်၏ဆွေမျိုးဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာမယ့်အမူအကျင့်တာဝန်အသုံးပြုသော36) ။ ဤသည်တာဝန်အထွက်နှုန်းက) ဆေးလိပ်သောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောအခါ, ပိုက်ဆံတို့သည်ငွေကိုခ) Self-စီမံခန့်ခွဲစီးကရက်အဘို့အဆေးလိပ်သောက် delay လုပ်ခြင်းသာရှိပြီးပြည်ပမှဆေးလိပ်စတင်များ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးရည်မှန်းချက်အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ။
Wardle et al ။ anhedonia တစ်ဦးအမူအကျင့်အတိုင်းအရှည် (အဖြစ်တိုးတက်သောအချိုးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြု19) ။ သင်တန်းသားများကိုလျော့နည်းဆုလာဘ်အတွက် option ကိုကို C ရလဒ်များကိုစဉ် သာ. ကြီးမြတ်အားထုတ်မှုလဲလှယ်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်အတွက်ရသော option ကိုတစ်ဦးကရလဒ်များကို options နှစ်ခုကိုရှေးခယျြပေမယ့်ဒီထက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအဘို့အနည်းပါးလာခလုတ်နှိပ်စိတ်ခွန်အားနိုး anhedonia ဖော်ပြသည်။ ဒါဟာ (အမူအကျင့်အတိုင်းအရှည်၏ဤအမျိုးအစား SHAPS မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်မဟုတ်ကြောင်းမှတ်ချက်ချခံရဖို့ရှိပါတယ်55).
အတူတူယူ, အမူအကျင့်တာဝန်များကိုသုံးပြီးလေးလေ့လာမှုများအားလုံးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့ထဲမှာထိပုတ်ပါနဲ့သူတို့ Self-အစီရင်ခံ anhedonia နှင့်အတူဆက်စပ်ပုံကို anhedonia ၏ရှုထောင့် / အတိုင်းအတာသောကြောင့်မရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
neurobiological အသုံးပြုသောခုနစ်ခုလေ့လာမှုများ, ဆိုလိုသည်မှာ neurophysiological သို့မဟုတ်ပုံရိပ်, anhedonia ၏အစီအမံ။ ပထမဦးစွာငယ်ရွယ်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကတစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက် resconance ပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှု (ငွေကြေးဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းတုံ့ပြန်အကဲဖြတ်တဲ့ Two-card ကိုခန့်မှန်းဂိမ်းအကောင်အထည်ဖော်38) ။ ဒီပါရာဒိုင်းခုနှစ်, anhedonia အနုတ်လက္ခဏာနျူကလိယ Accumbens (NACC) -medial Prefrontal Cortex (mPFC) ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပုံစံနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
Parvaz et al ။ ERP data တွေကိုလိုအပ်စဉ်တွင် (သူတို့တစ်ဦးချင်းစီတရားခွင်ပေါ်ပိုက်ဆံအနိုင်ရသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမယ်လို့ရှိမရှိခန့်မှန်းတဲ့လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အသုံးပြုသော40) ။ positive အစိတ်အပိုင်း (RewP) ဟောကိန်းထုတ်အနိုင်ရရှိစမ်းသပ်မှုတွေတုံ့ပြန်ဆုချသည့် ERPs ထံမှထုတ်ယူခဲ့သည်။ RewP လည်း anhedonia (ဆိုလိုသည်မှာ ventral striatum နှင့် mPFC) တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ဟုအတူတူပင်ဦးနှောက်ဒေသများမှစွပ်စွဲနေပါတယ်။ ရလဒ် CUD အတွက် anhedonia ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းဆုခခြံစမ်းသပ်မှုတွေတုံ့ပြန်အတွက် RewP လွှဲခွင်ပြသခဲ့သည်။
Mori et al ။ နှစ်ခု ERP ကင်းချိုးဖောက်လေ့လာမှုများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (ဖျော်ဖြေ41, 42) ။ Mori et al ၌တည်၏။ (41), ဆုလာဘ်များကွဲပြားဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ speeded တုံ့ပြန်မှုတာဝန်အသုံးပြုသည်။ ကိုကင်းအသုံးပြုသူများသည်တွေကို-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုချခြင်းနှင့်တာဝန်အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ကျရှုံးအကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ချက်ဖို့တုံးတုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ SHAPS ဖြင့်တိုင်းတာ Anhedonia လည်းကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်လျော့နည်းသွားစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ချက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ anhedonia များ၏အစီအမံကိုကင်းအသုံးပြုသူများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဆုလာဘ်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်41) ။ Mori et al ။ (42) ဓါတ်ပုံတွေကို valenced အပေါ်တုံ့ပြန်သည့် Go ကို / NoGo တာဝန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ, ဆိုလိုသည်မှာ, တားစီးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြည့်မှုပိုမိုတဲ့အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းတစ်ဦးဆက်စပ်မှု inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့် anhedonia အကြားရှိသောထိန်းချုပ်မှုအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
detoxified ဘိန်းဖြူ-မှီခိုလူနာတစ်ဦးအုပ်စုငယ်များတွင် binding striatal dopamine Transporter [ခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်123ကျွန်မ] လက်ဗွေ-cit တစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်တွက်ချက် tomography (SPECT) မီနှင့်တိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန် naltrexone နှင့်အတူဆေးထိုးပြီးနောက်2ရက်သတ္တပတ် (47) ။ စိတ်ကျရောဂါရမှတ်အခြေခံများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာရမှတ်အနည်းဆုံးလူနာတွေအတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြပေမယ့်တိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန် naltrexone (XRNT) ကုသမှုပြီးနောက်နိမ့်ခဲ့ကြ, အဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့များ anhedonia တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 820 ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူကြီးမားတဲ့ fMRI လေ့လာမှုအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်များလုပ်ကွက်သုံးခု, အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်များလုပ်ကွက်သုံးခုနှင့်သုံးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ကွက် (ပါဝင်သည်ဟုတစ် ventral striatum reactivity ကိုတာဝန်တစ်ခုပိတ်ဆို့နံပါတ်တစ်-နောက်ဆုံးတွင်ခန့်မှန်းပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြု23) ။ ဆုလာဘ်လျှော့ချ ventral striatum reactivity ကိုအစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့တစ်ဦးချင်းစီအတွက် anhedonia များအတွက်တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒါဟာအပြန်အလှန်သည်အခြားစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပြဿနာအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှုမှာ (Self-အစီရင်ခံစာ, အမူအကျင့် ရှိ. , neurobiological အစီအမံပေါင်းစပ်46) ။ သုံးဆယ့်ခြောက်ဦး opioid-မှီခိုလူနာနှင့် SHAPS အတွက်ဖြည့် 10 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုမှ hedonic တုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်ရန်မတိုင်မီအသုံးပြုခဲ့သည်ကွောငျးကိုထိခိုက်-modulated ထိတ်လန့်တုန့်ပြန် (AMSR), စိတ်ခံစားမှု valence တစ် psychophysiological အတိုင်းအတာ, ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုလေးခုအမျိုးအစားဆင်းသက်လာခြင်းကိုခံရနိုင်သည်, အပြုသဘောအနုတ်လက္ခဏာ, ကြားနေ, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်။ ဤအတောအတွင်း acoustic ထိတ်လန့်စုံစမ်းစစ်ဆေး variable ကိုအချက်များမှာတင်ဆက်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုများ၏မျက်စိ-မှိတ်အစိတ်အပိုင်းတွေ့ရစဉ်ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့အနီး-အနီအောက်ရောင်ခြည် spectroscopy (fNIRS) နဲ့စောင့်ကြည့်ခံနေရစဉ်အားလုံးသည်ပါဝင်သူတစ်ဦးစံအမြင်အာရုံ cue လှုပ်ရှားမှုပါရာဒိုင်းပြီးစီးခဲ့သည်။ လှုံ့ဆော်မှုသုံး hedonically အပြုသဘောအမျိုးအစား (အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ, အပြုသဘောလူမှုရေးအပြန်အလှန်နှင့်စိတ်ခံစားမှုရငျးနှီး) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများပါဝင်သည်။ Opioid-မှီခိုလူနာ Self-အစီရင်ခံစာအပေါ် သာ. ကြီးမြတ် anhedonia အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, AMSR တာဝန်အတွက်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုမှ hedonic တုံ့ပြန်မှုလျှော့ချနှင့်နှစ်နိုင်ငံ RPFC လျှော့ချခြင်းနှင့် imaged အစားအစာမှ VLPFC left နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြုသဘောလူမှုရေးအခြေအနေများမှလက်ဝဲ VLPFC လျှော့ချ။
ပိုပြီးလေ့လာမှုများသာ, နောက်တဖန်လူအပေါင်းတို့ကသူတို့ကို၏ရလဒ်များကိုတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ခက်ခဲအောင်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုအပြုအမူတာဝန်နှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်ဦး neurobiological အတိုင်းအတာကိုသုံးပေမယ့်အတူတကွယူ။ ဒါ့အပြင်သူကက de အချို့လေ့လာမှုများစိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်း (ဥပမာနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ဆက်သွယ်မှု) အတွက်လက္ခဏာများပေးပေမယ့်အဘယ်အရာကိုရှုထောင့် / anhedonia ၏ရှုထောင့်, ဤကွဲပြားခြားနားသော Paradigm နေဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိနေကြသည်သတ်မှတ်ခံရနေဆဲဖြစ်သည်။
DUS လူဦးရေအတွင်းမှာပဲ Anhedonia
အလွန်နည်းပါးလေ့လာမှုများ Non-DUS ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ DUS လူနာတစ်ဦးကိုနမူနာအကြား anhedonia နှိုင်းယှဉ်။ DUS တစ်ဦးချင်းစီ၏နမူနာအတွက် anhedonia နှင့်အတူစပ်လျဉ်းပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပြင်းထန်မှု-related variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်အခြားလေ့လာမှုများ။
ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူလေ့လာရေးကင်းချိုးဖောက်မှုများ, ဘိန်းဖြူ-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့် benzodiazepine-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ပိုပြီး anhedonic ခဲ့တသမတ်တည်းပြသခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် anhedonia ၏အဆင့်မြင့်ပိုပြီးပြင်းထန်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ် (42, 44, 46, 47, 49).
ထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲ DUS နမူနာအတွင်းလေ့လာရေးအလားတူရလဒ်ထင်ရှား; ဆိုလိုသည်မှာ anhedonia ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း variable တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အရက်အပေါ်သုံးလေ့လာမှုများ anhedonia နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်အကျိုးဆက်များ (အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့ပြသ20-22) ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်အတွင်းအများစုလေ့လာမှုများဆေးလိပ်သောက်အပေါ် anhedonia တစ်ခုဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများလက္ခဏာများသည်: စတင်, ဆေးလိပ်သောက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်နှင့်ပြင်းထန်မှု (24, 26, 29, 35) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း, ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲတင်းမာမှုများနှင့်အသုံးပြုမှုအဆင့်အစောပိုင်းစတင်ခြင်း (anhedonia ၏အဆင့်မြင့်နှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြ32, 37, 39) ။ လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်း subsample (ထဲမှာ anhedonia ၏အဆင့်မြင့်ပြသ48) ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုသတိထားအနက် warranting သာ 11 လောင်းကစားသမားတွေပါဝင်သည်။
အတူတူယူကွဲပြားခြားနားသောဝတ္ထုများကိုဖြတ်ပြီး, လက္ခဏာများ 1) DUS တစ်ဦးချင်းစီထိန်းချုပ်မှုထက် anhedonia ၏အဆင့်မြင့်ရှိသည်နှင့် 2) anhedonia ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းနှင့် DUS ၏နောက်ဆက်တွဲပြင်းထန်မှုနှင့်အတူ related စေခြင်းငှါကြောင်းကိုတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။
Anhedonia အချိန်သင်တန်းအမှတ်စဥ်: စရိုက်များသို့မဟုတ်ပြည်နယ်?
နီကိုတင်း-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအဘို့, anhedonia တစ်ပြည်နယ်နှင့်တစ်ဦးရိုအချက်နှစ်ခုလုံးကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာ 518 ငယ်ရွယ်သင်တန်းသားများနှင့်အတူတစ် longitudinal လေ့လာမှုအတွက် anhedonia ၏ရှေ့မှောက်တွင် (တမာကူ၏အသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်း24) ။ တစ်ဦးရိုအဖြစ် anhedonia အဘို့သက်သေအထောက်အထားလည်း (Leventhal ၏လေ့လာမှုတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်36), ပြီးသားအထက်တွင်ဖော်ပြထားသော (36) ။ အဆိုပါရို anhedonia မြန်ဆေးလိပ်သောက်စတင်ဟောကိန်းထုတ်နှင့်ပိုပြီးစီးကရက်ဝယ်ယူနှင့် 16-ဇဆေးလိပ် abstinence ရာ anhedonia စီးကရက်စားသုံးမှုဟောကိန်းထုတ်ဖို့အတိုင်းအတာ amplified ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု 1) anhedonia ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်ပိုမိုအားကောင်းလိုလားသူဆေးလိပ်သောက်ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်မှဖြစ်ကောင်းဆေးလိပ်သောက်စတင်ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်ကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူးသူကိုပိုမိုမြင့်မား ( vs. အောက်ပိုင်း) anhedonia နှင့်အတူဆေးလိပ်သောက် Initiative နှင့် 2) မြီးကောင်ပေါက်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းပြသ ဆေးလိပ်သောက်ရန် (26).
သည်အခြားတ္ထုများအဘို့အရို anhedonia ထောက်ပံ့ data ကိုအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဆေးခြောက်အဘို့, anhedonia (အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အစောပိုင်းဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏စတင်ခြင်းနှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းတင်းမာမှုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်32, 37).
အခြားတစ်ဖက်တွင်, anhedonia ဆေးလိပ်သောက်ဆုတ်ခွာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကွတ် et al ။ (34) (ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေနှင့်ဆေးရွက်ကြီးမှီခို၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သည့်ဆေးရွက်ကြီးချုပ်ရာမှတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု inverted ဦး-ပုံစံ, သရုပ်ပြ34) ။ ပြန်သွားကြသည်ခဲ့ပါဘူးသူကိုလူနာတွေအတွက်6လ 1 ပြီးနောက်ပုံမှန်လျှော့ချအခြေခံမှာ opioid-မှီခိုလူနာ (အများအားဖြင့်အတွင်းလူနာ), မြင့်မားသော anhedonia အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ2လနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု (ခုနှစ်တွင်45) ။ Garfield et al ၏လေ့လာမှုမှာ။ (44), anhedonia ၏မြင့် (ကျန်းကျန်းမာမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ opioid-မှီခိုသင်တန်းသားများအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်44) ။ opioid pharmacotherapy (ဆိုလိုသည်မှာ methadone နှင့် buprenorphine) ရက်နေ့တွင်သင်တန်းသားများအနက်သိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ opioids anhedonia ဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောယူဆချက်ကိုထောက်ပံ့သောမကြာသေးမီကတရားမဝင် opioid အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့် anhedonia ရမှတ်များအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့ abstinent opioid-မှီခိုသင်တန်းသားများ၏အုပ်စုတွင် abstinence နှင့် anhedonia ၏ကြာချိန်အကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။
Anhedonia နှင့် DUS နှင့်စီးပွားပျက်ကပ် Comorbidity
အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ (AUD) ကိုရည်မှတ်လေးလေ့လာမှုများထဲကနှစ်ဦးကိုအဖြစ်ကောင်းစွာ comorbidity အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အထွေထွေပြည်သူ့အင်အား (MHGP) အတွက်စိတ်ကျန်းမာရေး၏အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ (MDD) -subsample ခုနှစ်, 4,339 ဘာသာရပ်များ (MDD များအတွက်စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး20) ။ အဆိုပါ MDD လူဦးရေအတွက်, 413 AUD ဘာသာရပ်များအရက်မှီခိုနှင့်အတူအရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့် 138 နှင့်အတူ 275 ဘာသာရပ်များအပါအဝင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ Anhedonia AUD (OR 1.66) မရှိဘဲအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် MDD နှင့် AUD နှင့်အတူအုပ်စုတွင်အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
916 စိတ်ဒဏ်ရာ-ထိတွေ့အမေရိကန်စစ်ဘက်စစ်ပြန်တစ်နမူနာစစ်ပြန်လေ့လာမှု (NHRVS အတွက်အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်ခံနိုင်ရည်ထံမှပိုကြီးတဲ့ Datasets ကနေရေးဆွဲခဲ့သည် 21) ။ တစ်ဦးက subsample ဟာစိတ်ထိခိုက်သမိုင်းဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ "အဆိုးဆုံး" စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်ထောက်ခံကြောင်းကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ဒီ nonclinical နမူနာမှာတော့ PTSD ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုများနှင့်အကျိုးဆက်များခုနစ်-Factor ဟိုက်ဘရစ်မော်ဒယ်အကြားအသင်းအဖွဲ့များတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်သက်တာ anhedonia အတူတကွ dysphoric arousal နဲ့အနှုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်အများစုပြင်းပြင်းထန်ထန်အတိတ်နှစ်အရက်အကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
MDD comorbidity အဖြစ်ကောင်းစွာနီကိုတင်းစာတမ်းများအတွက်လေ့လာခဲ့သည်။ အရှေ့မြောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကြီးမားသော VA သို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကနေစစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ်ဦး MDD / dysthymia subsample ခုနှစ်, 36 ဆေးလိပ်သောက် 44 နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်စိတ်ကျရောဂါ (Non-ဆေးလိပ်သောက်စိတ်ကျရောဂါ28) ။ စိတ်ဓာတ်ကျဆေးလိပ်သောက်ပိုပြီး anhedonia နှင့်လျှော့ချဆုလာဘ်တုန့်ပြန်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ သို့သော်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာသင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်, စိတ်ဓာတ်ကျဆေးလိပ်သောက်စိတ်ဓာတ်ဆေးလိပ်သောက်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှုပိုမိုကြံ့ခိုင်ဝယ်ယူသရုပ်ပြကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့ပိုမကြာခဏဆုခခြံလှုံ့ဆော်မှု, များအတွက်ပိုမိုအားကောင်း preference ကိုပြသခဲ့သည်။
Leventhal et al ။ (36) ကို CIDI အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်သက်တာစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတှကျအနီကိုတင်းအတွက် relapse နှင့်အတူ anhedonia နှင့်စိတ်ဓာတ်ခံစားချက်အကြားစပ်လျဉ်းချိန်ညှိ။ anhedonia လုပ်ခဲ့တယ်နေချိန်မှာစိတ်ဓာတ်ခံစားချက် (ရပ်နားခြင်းရလဒ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါဘူး36).
ဆေးခြောက်အဘို့, တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှု CUD နှင့် MDD အကြား comorbidity အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ Feingold et al ။ (39) (ကအမျိုးသားရေးစစ်တမ်းတစ်ဦးထံမှ MDD အဖွဲ့ခွဲရွေးချယ်လွှတ်နှုန်းထားများနှင့်အတူသို့မဟုတ် CUD မပါဘဲ MDD အကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူးစဉ်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏အဆငျ့, အထူးသ anhedonia, နောက်ဆက်တွဲမှာပိုပြီးရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကောက်ချက်ချ39).
Rizvi et al ။ (49) anhedonia ပုံမှန်အစည်းအဝေး benzodiazepine အသုံးပြုမှုအင်အားအကောင်းဆုံးခန့်မှန်း (ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ anhedonia benzodiazepines သုံးပြီး MDD လူနာအတွက်ပိုပြီးသိသာခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြ49).
တဦးတည်း fMRI လေ့လာမှု (အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုသင်တန်းသားများအဘို့, anhedonia တစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အတွက် (ငွေကြေး) ဆုလာဘ်တစ်ခုလျော့နည်းသွား ventral striatum reactivity ကိုပြသ23) ။ ဤတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အထူး, စိတ်ခွန်အားနိုး anhedonia ချို့ယွင်းကြောင်းအကြံပြုပေလိမ့်မည်။
DUS ၏ကုသမှုအပေါ် Anhedonia နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု
အများစုမှာလေ့လာမှုများကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် anhedonia တစ်ခုဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ ကြီးမားတဲ့ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာတရားခွင်များတွင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရက်ကြာဆုတ်ခွာလေးကွဲပြားအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်: အအလယ်အလတ်ဆုတ်ခွာလူတန်းစားငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့် anhedonia ဘို့မဆိုတစ်ဦးချင်းစီလက္ခဏာများ၏မြင့်မားအစီရင်ခံရန်အနည်းဆုံးဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ high-တဏှာ anhedonia အုပ်စုသည်တဏှာနှင့် anhedonia ၏မြင့်မားသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘေးဒဏ်သင့်ဆုတ်ခွာအုပ်စုသည်ဆင်းရဲသောသူကိုအာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်မြင့်မားတဲ့သွင်းယူခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်။ အဆိုပါငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအုပ်စုတစ်စုကအခြားအညွှန်းကိန်းအပေါ်မြင့်မားတဲ့ဆေးလိပ်ဖြတ်ရက်ကြာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, ဒါပေမယ့်အနိမ့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ high-တဏှာ anhedonia အုပ်စုသည် (အနိမ့်တပတ် 8 abstinence အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမယ့်လည်းဒီစမ်းသပ်မှုထဲမှာပေါင်းစပ်နီကိုတင်းအစားထိုးရရှိထားရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်28).
1,469 သင်တန်းသားများနှင့်အတူအခြားဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းကုသမှုလေ့လာမှုမှာတော့တစ်သက်တာ anhedonia (8 ရက်သတ္တပတ်နှင့်6လအကြာ relapse ၏တိုးမြှင့်လေးသာခန့်မှန်း36) ။ ထိုမှတပါး, Post-နုတ်ထွက် anhedonia နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ပြန်သွားကြသည်မှအောင်းနေချိန်လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်နိမ့် 8-ရက်သတ္တပတ်အမှတ်ပျံ့နှံ့ abstinence အတူ။ အလားတူတွေ့ရှိချက်တူညီတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းလမ်း ( အသုံးပြု. Piper ရဲ့လေ့လာမှုမှာသရုပ်ပြခဲ့သည်28) ။ သူတို့ကမြင့်မားသောတဏှာ anhedonia အုပ်စု 8 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အောက်ပိုင်း abstinence သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Wardle et al ။ (19) anhedonia အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုကအောက်ပါကင်း-မှီခိုသင်တန်းသားများအဘို့ဆင်းရဲသားတို့ကိုကုသမှုရလဒ်ကို (ဆိုလိုသည်မှာကင်း-အနုတ်လက္ခဏာဆီး) နဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦး dopamine-agonist (L-DOPA) (anhedonia အားဖြင့်တည်းဖြတ် L-DOPA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဒီလေ့လာမှုအတွက်ရလဒ်များတိုးတက်စေရ, မခဲ့ကြဘူး19).
တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှုမှာ anhedonia (ကုသမှုအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့30) ။ 21-mg ကိုနီကိုတင်းအပေါ်လက်တွေ့ရပ်နားခြင်းရုံးတင်စစ်ဆေးခုနှစ်တွင် 8 ပတ်တစ်ရက် patch, 70 သင်တန်းသားများ SHAPS အပေါ်အခြေခံပြီး anhedonic ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ anhedonic ဆေးလိပ်သောက်နေတဲ့နီကိုတင်း patch ကိုအပေါ် abstinent ခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
ဒီရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး-ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်တှငျကြှနျုပျတို့ anhedonia နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေစူးစမ်း 32 မူရင်းသုတေသနစာတမ်းများဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များ 1) anhedonia ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပြဿနာများ / မမှန်နှင့်ဆက်စပ်နှင့်သူတို့၏ပြင်းထန်မှုဖြစ်ပါတယ် 2) anhedonia comorbid စိတ်ကျရောဂါနှင့်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ DUS အတွက်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, 3) anhedonia က၎င်း၏တစ်ဦးရိုနှင့်ပြည်နယ်အတိုင်းအတာနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စေခြင်းငှါလက္ခဏာများသည် DUS စပ်လျဉ်းနှင့် 4) anhedonia အဆိုး DUS ကုသမှုရလဒ်ကို impact ကြတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အများဆုံးသက်သေအထောက်အထား DUS နှင့်ဆက်ဆံရေးအတွင်း anhedonia ၏အများဆုံးပါဝင်ပတ်သက် subdimension အဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုး anhedonia မှထောက်ပြသည်။
ယေဘုယျအားဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်တွေ့ရှိချက်, နောက်ဆုံး5နှစ်အတွင်းဆောင်းပါးများကိုအာရုံစိုက်, Garfield et al များ၏အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အညီ၌ရှိကြ၏။ (3) ။ အလွဲသုံးစားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဝတ္ထုများကိုဖြတ်ပြီး, ဒီပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်တွေ့ရှိချက် anhedonia-အဖြစ်ကျယ်ပြန့် DUS နှင့် DUS ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်အယူအဆ-ကြောင်းလက္ခဏာများသည်။ သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်သည်အမှုဆောင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်စင်စစ်တစ်ထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ၏နံပါတ်အလွန်ကန့်သတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်မတူညီတဲ့လေ့လာမှုများတလျှောက်လုံးအသုံးပြုတဲ့ပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာခက်ခဲတသမတ်တည်းအနက်ကိုစွန့်ခွာအလွန် variable ကိုဖြစ်ကြသည်။ စုစုပေါင်းလေ့လာမှုများ၏နံပါတ် Sud အတွက်အရင်းခံတွန်းအား / အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုများများ၏အရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသည့်အခါအလွန်အထူးသဖြင့်ကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးမီကသဘောတူစာရွက်ထဲတွင် RDoC အပြုသဘောဆောင်သော valence စနစ် (ဆုကြေးအကောက်ခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မည်, မျှော်လင့်ချက်များ, လှုပ်ရှားမှုရွေးချယ်ရေး, သင်ယူ, ကျင့်၌ဆပ်), စတင်, ဆက်လက်များအတွက်အားနည်းချက်များအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ, စွဲလမ်းမမှန်များ၏ pathogenesis မှလေးစားမှုနှင့်အတူမရှိမဖြစ်ဒိုမိန်းအဖြစ်ရှေ့ဆက်ထားခဲ့ပါတယ် နှင့်ရောဂါ၏နာတာရှည် (8) ။ Anhedonia နှစ်ဦးစလုံးအနုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြုသဘော valence စနစ်များ၏ bridge အပေါ် positioned နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အပေါင်းအသင်းနီးစပ်, အကောက်ခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မည်ဆုနျမြျှောလငျ့ဆုနှင့်သင်ယူခြင်း၌ဆပ်ရန်။ ဒါကသီအိုရီမြေပြင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်၏တွေ့ရှိချက် anhedonia ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုရထိုက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ထိုမှတပါး, anhedonia (အရေးပါတဲ့ "transdiagnostic" အယူအဆအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ရောဂါမမှန်အခြေခံ, ဥပမာ, စိတ်ကျရောဂါ, စိတ်ကြွရောဂါနှင့် schizophrenia အဖြစ်ကြည့်ရှုနေသည်11) ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်မမှန်ပြောင်းလဲဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ရန်, ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပြန်ပြောပြ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ anhedonia ဆက်စပ်မှုထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဓါတ်များမမှန်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းပုံမမှန် (အဖြစ်စိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ pathogenesis အတွက်ရောင်ခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်တစ်ဦးကြီးထွားလာစာပေနှင့်အတူပေါင်းကူးဆက်သွယ်ကြလိမ့်မယ်56) ။ ဒီရှုထောင့်ကနေ, ကရောင်ရမ်းလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု neurobiological အားနည်းချက်နာတာရှည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း (အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှု) နှင့် anhedonia အကြား link ကိုမောင်းစေခြင်းငှါတွေးဆနိုင်ပါသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက် (အကြီးစား) လေ့လာမှုတစ်ခုသာရှိပြီးအရေအတွက်ကို comorbidity အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြီး comorbid စိတ်ဓါတ်များရောဂါနှင့်အတူ DUS လူနာတစ်ခုတည်းရောဂါအုပ်စုများမှနှိုင်းယှဉ်ပါက anhedonia ၏အဆင့်မြင့်ခဲ့ကြောင်းလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် anhedonia ရောဂါသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ၏အနည်းဆုံးတစ်ဦးမျိုးကွဲနှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများကိုအခြေခံတဲ့ဘုံဆခွဲကိန်းဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းအယူအဆတချို့မြေပြင်ပေးပါ။ anhedonia ဟာထင်ရှားတဲ့အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူစိတ်ကျရောဂါအတွက် Subtype မကြာသေးမီကအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ အထူးသကာ "ရောင်ရမ်း" မျိုးကွဲစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် anhedonic လက္ခဏာတွေ (အကြား link ကိုမောင်းထုတ်ကြောင့်ရောင်ရမ်းလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု neurobiological အားနည်းချက်နှင့်အတူအဆိုပြုပြီးပါပြီ56) ။ အကျိုးစီးပွားစောစောကလေးဘဝဒုက္ခကဒီ neurobiological အားနည်းချက်ပြောင်းလဲပစ်အရှိဆုံးအရေးပါအချက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ (အထူးသစိတ်ဒဏ်ရာထိတွေ့တစ်ဦးချင်းစီ၏လူဦးရေအတွက်, ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုနှစ်ခုလေ့လာမှုများ anhedonia နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြင်းထန်မှုအကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အသင်းအဖွဲ့ပြထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်21, 23) ။ DUS နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွင်းမှာအစောပိုင်းကလေးဘဝဒုက္ခ၏မြင့်ပျံ့နှံ့ပေးထားအနာဂတ်လေ့လာမှုများဒီအဖွဲ့ခွဲ anhedonia နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သည်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်အတွက် anhedonia အပေါ်သုတေသနဥပမာစိတ်ကျရောဂါလည်း Sud အတွက် anhedonia သုတေသနပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လောက်သို့ပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့အများအားဖြင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆုလာဘ်သင်ယူမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ကိုခွဲခြားနိုင်ခြင်းရှိနေစဉ်, Self-အစီရင်ခံစာများ, အများဆုံးအသုံးပြုတူရိယာဖြစ်ကြသည်။ စိတ်ကျရောဂါစာပေများတွင်သို့သော် anhedonia စပ်လျဉ်းဆုလာဘ်အမျိုးမျိုးရှုထောင့်အမူအကျင့်တာဝန်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများနှင့် neurobiological အစီအမံ, အဓိကအားဖြင့်အဖြစ်အပျက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အလားအလာ (ERP) လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီး disentangled နိုငျသညျ။ Neuroimaging လေ့လာမှုများ (အကောင့်ထဲသို့ fMRI Paradigm anticipatory, သူတွေရဲ့စားသောက်သို့ခွဲစိတ်ဖို့အများစုမရခဲ့သောစိတ်ကူးတာနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုလေ့လာသင်ယူ, အဖြစ်ကောင်းစွာအသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်23) ။ အနာဂတ်သုတေသနစီမံကိန်းများတွင်တူညီသော Paradigm သုံးပြီးတစ်ဦးက multimode ချဉ်းကပ်အကြံပြုသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆက်စပ်အတွင်း anhedonia ၏ပြည်နယ်ဝိသေသနှိုင်းယှဉ်သည့်ရိုအဖြစ်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုပြသရောထွေး results မှဒေတာများ။ အချို့လေ့လာမှုများ anhedonia အစောပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုစတင်နှင့်အစောပိုင်းတင်းမာမှုများအတွက်အားနည်းချက်အခြေခံတဲ့ရိုဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းအယူအဆမှပံ့ပိုးကူညီမှုပေးပါ။ တ္ထုများစိတ်အခြေအနေမမှန်သို့မဟုတ်ပင်ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ (ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အသုံးပြုကြသည်မထွက်ရဒါက Self-ဆေးဝါးသီအိုရီနှင့်အညီဖြစ်ပါသည်9) ။ ဒါ့အပြင်မြင့်မားသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် amygdala reactivity ကိုအတူဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအပြည့်အဝစံအရက်သောက်လောင်ဖို့ပိုများပါတယ်စောစောမူးယစ်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုများပါတယ်နှင့်တစ်ဦးအရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါစတင်ခြင်းများအတွက်မြင့်အန္တရာယ်မှာ (57) ။ ဒီလိုင်းအတွက်, anhedonia အစောပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုဘယ်နေရာတွေမှာ DUS အန္တရာယ်၏နောက်ဆက်တွဲတိုးတစ်ခုအားနည်းချက်ရိုအဖြစ်တွေးဆနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကအယူအဆအကျိုးကိုချို့တဲ့အယူအဆ (နှင့်အညီလည်းဖြစ်ပါတယ်58) ။ ပြောင်းပြန်, ဒီပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများ abstinence အတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးတက်အောင်စဉ် anhedonia ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီကုသမှုနှင့် abstinence (စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တုန့်ပြန်အတွက်တိုးတက်မှုဖေါ်ပြခြင်းအစောပိုင်းလေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်ပါသည်59) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တစ်ပြည်နယ်ဝိသေသများ၏ညွှန်ပြကြသည်။ သို့သော် longitudinal လေ့လာမှုများ, အလွန်ရှားပါးသောရှိနေဆဲဆိုလိုသည်မှာဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှု (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးတက်မှုဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦး6လ abstinence ကာလအတွင်း anhedonia ၏သင်တန်းနောက်တော်သို့လိုက်45) ။ ဒီတော့ရိုသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ကိုရည်မှတ်မဆိုနိဂုံးချုပ်မှာအကောင်းဆုံးပဏာမဖြစ်ပါတယ်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်အများအပြားလေ့လာမှုများဆိုလိုသည်မှာတိုတောင်း posttreatment abstinence နှင့်အဆင့်မြင့် relapse နှုန်းထားများ, DUS သင်တန်းနှင့်ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် anhedonia တစ်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြသခဲ့သည်။ ဤ (anhedonia relapse များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွါးကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်အစောပိုင်းကပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်တင်ပြတွေ့ရှိချက်၏အတည်ပြုချက်ကိုသည်နှင့်တဏှာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်3) ။ အဆိုပါစိတ်ကျရောဂါသုတေသနများတွင် anhedonia အနုတ်လက္ခဏာရောဂါသင်တန်းသြဇာလွှမ်းမိုး။ ဤသည်ကိုလည်း (စိတ်ကျရောဂါကုသများ၏အခြေအနေတွင်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်13-16) ။ ဒါဟာ transdiagnostic ဝိသေသအဖြစ် anhedonia ရောဂါသင်တန်းနှင့်ရလဒ်ကို modulates ကြောင်းတွေးဆနိုင်ပါသည်။
စိတ်ကျရောဂါကုသဆက်စပ်အတွင်းမှာပဲတည်ဆဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် pharmacological ကုသ anhedonia ကုသမှုအတွက်မဟုတ်ဘဲထိရောက်မှုဖြစ်ထင်ရှားပြကြပြီ။ ပိုအသုံးအများဆုံးစိတ်မကျဆေး Antidepressants, ဥပမာ fluoxetine, အချို့သည်ပင် (anhedonic လက္ခဏာတွေပိုမိုဆိုးဝါးလာစေခြင်းငှါ60-62) ။ အရေးပါမှု, ထိုကဲ့သို့သော ketamine အဖြစ်အသစ်များကုသမှု (ပင်ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါအတွက် anhedonia ၏တိုးတက်မှုရှိသည်ဖို့ပြသနေကြသည်63, 64) ။ ဤ (ketamine DUS ၏ကုသမှုဆက်စပ်အတွင်းအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုလည်းအရိပ်အယောင်၏ရှုထောင့်ကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်65) ။ ဤအချက်မှာမရှိလေ့လာမှု DUS နှင့်စိတ်ကျရောဂါ / anhedonia comorbidity နှင့်အတူလူနာတွေအတွက်ကုသမှုအဖြစ် ketamine ၏ထိရောက်မှုကိုရှာဖွေစူးစမ်းထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း, ဒီတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်း၏အစားထိုးကုသမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, နီကိုတင်း patch ကို) အထူးသ anhedonia အပေါ်မြင့်မားသောသွင်းယူဆေးလိပ်သောက်ဘို့အကျိုးရှိသောဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်အားကြီး et al ။ (30) တစ်ဦး 21-မီလီဂရမ် / နေ့နီကိုတင်း patch ကိုကုထုံးသုံးပြီးရေတိုရေရှည် abstinence တစ်ခုတိုးလာဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြသခဲ့သည်။ ကွတ် et al ။ (34) စီမံခန့်ခွဲနီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံး abstinence-သွေးဆောင် anhedonia နှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ရေတိုရေရှည် abstinence စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေများလျော့ကျကြောင်းလေ့လာသည်။ ထိုမှတပါး, စိတ်ဓာတ်ကျ Non-ဆေးလိပ်သောက်သူများ (NRT (နှင့်အထူးသဖြင့်နီကိုတင်း patch ကို) လက္ခဏာတူသောသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, နီကိုတင်း patch ကိုဆေးကုနေစဉ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေသိသိသာသာကျဆင်းမှုကိုပြသ66) ။ ဒါဟာ data တွေကိုတုံ့ပြန် anticipatory ဆုလာဘ်စဉ်အတွင်း dorsal striatum အတွက်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးတိုးမြှင့် activation ဖေါ်ပြခြင်းနဲ့အတူနှင့် medial အတွက်နီကိုတင်းထိတွေ့စိတ်ဓာတ်ဆေးလိပ်သောက်သူများအကြား (caudate, နျူကလိယ accumbens, putamen အပါအဝင်) အကျိုးကိုလမ်းကြောင်း၏အရေးပါအဆောက်အဦများအတွက် hypoactivation ameliorates ကြောင်းတွေးဆထားသည် ဆုချမှ sensitivity ကိုနဲ့ဆက်စပ် prefrontal cortex (67) ။ ဒါဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံများ et al ၏လေ့လာမှုမှာ anhedonic သင်တန်းသားများ၏နမူနာကြောင်းမှတ်ချက်ချခံရဖို့ရှိပါတယ်။ (30) ငယ်နှင့်တစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာအခြေအနေမရှိခြင်းကြောင့်ခက်ခဲပိုပြီးယေဘုယျအား pretreatment anhedonia သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါအပေါ်နီကိုတင်း patch ကိုကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အခြဆွဲရန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ aripiprazole အရက် abstinence မြှင့်တင်ရန်နှင့် anhedonia လျှော့ချအံ့သောငှါပဏာမသက်သေအထောက်အထားဖြစ်နိုင်သည်ရှိ၏ မှတဆင့် အဆိုပါနံရံပစ်ကစားနည်း-subcortical circuitries မှာ dopaminergic နှင့် serotonergic Module (68) ။ သို့သော်ဤအနာဂတ်ပွားလိုအပ်ပါသည်။
anhedonia ဆက်ဆံဖို့အထူးစိန်ခေါ်ဖြစ်သော်လည်းအတူတကွခေါ်ဆောင်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါသင်တန်း impact နိုငျသညျ, ဤအပဏာမလေ့လာမှုများအနာဂတ်-pharmacological-ကုသဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့ကတိတော်များကိုကိုင်ထားပါ။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်တွေ့ရှိချက်ပြင်းထန်စွာကြည့်ရှုခြင်းကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အများအပြားကန့်အသတ်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာလေ့လာမှုများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်အာရုံစိုက်ပါ။ အလွဲသုံးစားမှု၏အခြားတ္ထုများအကြီးအကျယ်ခွဲရှိနေဆဲနှင့်အမူအကျင့်စှဲခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. , သတင်းအချက်အလက်သုညဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အလေ့လာမှုများတလျှောက်လုံး, anhedonia အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတိုင်းတာမှုများအဘယ်သူအားမျှအဘို့သူတို့ကတိုင်းတာအတိအကျကိုအဘယျသို့ anhedonia အတိုင်းအတာလူသိများသည်, မလုံလောကျသတင်းအချက်အလက်များသည်ဤအစီအမံဆက်စပ်မည်သို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကမဖြစ်နိုင်တဲ့နှင့်တစ်ခါတစ်ရံဆနျ့ကငျြတွေ့ရှိချက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည်လေ့လာမှုများအကြားတစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စေသည်။ တတိယအချက်ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုဒီဇိုင်းများနှင့်နမူနာကခက်ခဲ anhedonia နှင့် DUS အကြားယာယီနှင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ယေဘုယျကောက်ချက်ဆွဲရန်ကို, အသုံးပြုကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ဥစ်စာဟာ anhedonia-DUS ဆက်ဆံရေး၏ကျယ်ပြန့်လယ်ကွင်းမီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့ Explorer, ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အနာဂတ်အယူအဆ-မောင်းနှင်လေ့လာမှုများလက်တွေ့အကျိုးဆက်များပေါ်နှင့်အတိအကျအခြေခံယန္တရားနှင့် neurocognitive အတိုင်းအတာ elucidating အပေါ်နှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်နေပါသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကနေတွေ့ရှိချက် anhedonia စွဲလမ်းပုံမမှန်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ comorbidities ၏ pathogenesis ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုအဘို့ဆီလျော်၏ဖြစ်အံ့သောငှါလက္ခဏာများသည်။ Anhedonia ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ချို့ယွင်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်အများအပြားမမှန်အခြေခံတစ်ခုအရေးမကြီး transdiagnostic အတိုင်းအတာဖြစ်သက်သေပြပါလိမ့်မယ်။ 1) ဒိုမိန်း: စိတ်ကျန်းမာရေးရဲ့ (NIH) သုတေသနဒိုမိန်းလိုအပ်ချက် (RDoC) ၏အမျိုးသား Institute မှအတွင်းမှာပဲ anhedonia အောက်ပါဒိုမိန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွင်းတစ်ဦး RDoC Element ကို (အပြုအမူ) အဖြစ် conceptualized ဖြစ်ပါတယ်အပျက်သဘောဆောင်သော valence စနစ်များ; ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး: 2) တည်ဆောက်ခြင်း။ သို့သော် anhedonia လည်းဆိုလိုသည်မှာအပြုသဘောဆောင်သော valence စနစ်များ (အခြား domains များချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါ11), anhedonia သည်ဤစနစ်များကိုပေါင်းကူးဆက်သွယ်အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်နှင့် / သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးကွဲ / ယန္တရားများကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ, ဒါ။
သို့သော် Impulse ၏လယ်ပြင်မတူဘဲအတွက် DUS အတူဆက်ဆံရေးအတွက် anhedonia ၏လေ့လာမှုသာအခြေတည်သည်။ ဒီရောင်ပြန်လေ့လာမှုများ၏အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုဒါပေမယ့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုအစီအမံများနှင့်သဘောတရားများကို၏အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမသာဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုလျင်မြန်စွာပေါ်တွင်လယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ကူညီရန်ဖို့ neurocognitive အတိုင်းအတာများနှင့်အကောင်းဆုံးတိုင်းတာခြင်းတူရိယာ / Paradigm defining အတွက်သဘောတူညီမှုများစွာသောလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင်အတွင်းမှာပဲစှဲမှ neuroscience အတွင်းအများဆုံးဝေဖန်သိမြင် domains များဖော်ထုတ်မကြာသေးမီကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုစက္ကူအရေးပါသောပဏာမခြေလှမ်း (ဖြစ်ပါတယ်8) ။ ဘယ်လိုအခါ anhedonia ဒီ model အတွက်နေရာတစ်နေရာတွေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
1. အရက် GBD, မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှု C. အရက်ဖို့တွေကပေါ်ကနေရောဂါနှင့် 195 နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး, 1990-2016: ရောဂါလေ့လာမှု 2016 ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာများအတွက်စနစ်တကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ. ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု (2018) 5(12):987–1012. 10.1016/S2215-0366(18)30337-7 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Koob gf ။ စွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်း: အ Horsley Gantt ယောသပ်သည် Brady ဆက်သွယ်မှုမှ. J ကိုအာရုံကြော Ment dis (2017) 205(4): 270-2 ။ 10.1097 / NMD.0000000000000551 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Garfield JB, Lubman ပစ, Yucel အမ် ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက် Anhedonia: တစ်စနစ်တကျယင်း၏သဘာဝတရား၏သုံးသပ်ချက်ကို, သင်တန်းနှင့်လက်တွေ့ဆက်စပ်မှု. Aust NZJ စိတ်ရောဂါကုသမှု (2014) 48(1): 36-51 ။ 10.1177 / 0004867413508455 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Timary P ကို, Starkel P ကို, Delzenne မိုင်, Leclercq အက်စ်က de အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရံကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကတစ်အခန်းကဏ္ဍ? Neuropharmacology (2017) 122: 148-60 ။ 10.1016 / j.neuropharm.2017.04.013 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. et al de Berardis: D, Fornaro M က, Orsolini L ကို, Iasevoli က F, Tomasetti ကို C, က de Bartolomeis တစ်ဦး။ တစ်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု "စစ်မှန်သောကမ္ဘာ," နေ့စဉ်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်: အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် C-reactive protein အဆင့်ဆင့်အပေါ် agomelatine ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု. CNS Spectr (2017) 22(4): 342-7 ။ 10.1017 / S1092852916000572 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. et al de Berardis: D, Fornaro M က, Serroni N ကို, Campanella: D, Rapini, G, Olivieri L ကို။ နယ်နိမိတ်ကျော်လွန် Agomelatine: အဓိကစိတ်ကျရောဂါထက်အခြားရောဂါများအတွက်၎င်း၏ထိရောက်မှု၏လက်ရှိအထောက်အထားများ. int J ကို Mol သိပ္ပံ (2015) 16(1): 1111-30 ။ 10.3390 / ijms16011111 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Martinotti, G, Pettorruso M က, De Berardis: D, et al Varasano PA ဆိုပြီး, Lucidi Pressanti, G, De Remigis V ကို။ Agomelatine စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်စပ်အတွက်စိတ်ဓာတ်ကျလူနာ BDNF သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်တိုးပွါး. int J ကို Neuropsychopharmacol (2016) 19(5) ။ 10.1093 / ijnp / pyw003 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8. Yücel M က, Oldenhof အီး, Ahmed က SH, ဘီးလင်း: D, Billieux J ကို, Bowden-ဂျုံးစ် H ကို, et al ။ စွဲလမ်းများအတွက် neuropsychological အကဲဖြတ်ဆီသို့တစ်ဦးက transdiagnostic ရှုထောင်ချဉ်းကပ်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Delphi သဘောတူညီမှုလေ့လာမှု. စှဲမွဲမှု (2019) 114(6): 1095-109 ။ 10.1111 / add.14424 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Turner က S, Mota N ကို, ဘော်လ်တန် J ကို, Sareen ဂျေ ခံစားချက်နှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်အဘို့အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူ self-ဆေးဝါး: အ epidemiological စာပေ၏ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်. ပူပန်စိတ်ကျရောဂါ (2018) 35(9): 851-60 ။ 10.1002 / da.22771 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10 ။ Craske MG, Meuret AE, Ritz T က, Treanor M က, Dour HJ ။ anhedonia များအတွက်ကုသမှုမှ neuroscience မောင်းနှင်ချဉ်းကပ်. ပူပန်စိတ်ကျရောဂါ (2016) 33(10): 927-38 ။ 10.1002 / da.22490 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11 ။ Nusslock R ကို, အလွိုင်း LB. အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စိတ်ဓါတ်များ-related လက္ခဏာတွေဆုချ: တစ်ခု RDoC နဲ့ဘာသာပြန် neuroscience ရှုထောင့်. J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု (2017) 216: 3-16 ။ 10.1016 / j.jad.2017.02.001 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12 ။ Treadway MT ။ စိတ်ကျရောဂါ-အနေနဲ့သမ္မတလောင်း pathomechanisms အပေါ် update ကိုအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှု၏ neurobiology. Curr ထိပ်တန်းပြုမူနေ neuroscience (2016) 27:337–55. 10.1007/7854_2015_400 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13 ။ Fawcett J ကို, Scheftner WA, Fogg L ကို, Clark က, DC, Young ကနေ MA, Hedeker: D, et al ။ အဓိကထိခိုက်စေရောဂါအတွက်သတ်သေအချိန်-related ခန့်မှန်း. နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (1990) 147(9): 1189-94 ။ 10.1176 / ajp.147.9.1189 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14 ။ မောရစ် BH, Bylsma LM, Rottenberg ဂျေ စိတ်ခံစားမှုကအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ၏သင်တန်းကြိုတင်ခန့်မှန်းသလားအလားအလာလေ့လာမှုတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု. br J ကို Clin Psychol (2009) 48(PT 3):255–73. 10.1348/014466508X396549 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
15 ။ Uher R ကို, Perlis RH အ, Henigsberg N ကို, Zobel တစ်ဦးက, Rietschel M က, Morse အို et al ။ လက္ခဏာကုသမှုရလဒ်ကို၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာအတိုင်းအတာ: အကျိုးစီးပွား-လှုပ်ရှားမှုရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့အပုံတူပွားသက်သေအထောက်အထား. Psychol Med (2012) 42(5): 967-80 ။ 10.1017 / S0033291711001905 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16 ။ Winer ES, Nadorff MR, အဲလစ် TE, Allen က JG, Herrera S ကိုလမ်တီ Anhedonia ကြီးမားတဲ့စိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာနမူနာများတွင်သတ်သေ ideation ခန့်မှန်း. စိတ်ရောဂါကုသမှု Res (2014) 218(1-2): 124-8 ။ 10.1016 / j.psychres.2014.04.016 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17 ။ Scheggi S က, De Monty MG, Gambarana C. anhedonia ၏ကြွက်မော်ဒယ်များ၏အဓိပ္ပာယ် Making. int J ကို Neuropsychopharmacol (2018) 21(11): 1049-65 ။ 10.1093 / ijnp / pyy083 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18 ။ Treadway MT, Zald DH ။ စိတ်ကျရောဂါအတွက် anhedonia ပြန်လည်: Translation မှ neuroscience ထံမှသင်ခန်းစာများ. neuroscience Biobehav ဗြာ (2011) 35(3): 537-55 ။ 10.1016 / j.neubiorev.2010.06.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19 ။ Wardle MC, ဗင်းဆင့်ဖြစ်မှု, Suchting R ကို, အစိမ်းရောင်အီး, ယာဉ်ကြော SD, Schmitz JM ။ Anhedonia ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းရောဂါများအတွက်အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဆင်းရဲတဲ့ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်. J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော (2017) 72: 32-9 ။ 10.1016 / j.jsat.2016.08.020 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20 ။ စက္ဏူထူ L ကို, Pignon B, Baguet တစ်ဦးက, Benradia ငါ Roelandt JL, Vaiva, G, et al ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါများ၏လက်တွေ့ပုံစံများအပေါ် comorbid အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: တစ်ယေဘုယျလူဦးရေ-based လေ့လာမှု. မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ (2018) 187: 40-7 ။ 10.1016 / j.drugalcdep.2018.02.009 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21 ။ Claycomb Erwin M က, Charak R ကို, Durham က TA, ချပ်ဝတ်တန်ဆာကို C, Ly ကို C, Southwick သည် SM, et al ။ စိတ်ဒဏ်ရာ-ထိတွေ့စစ်ပြန်တစ်အမျိုးသားရေးနမူနာအတွက် DSM-7 PTSD ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုများနှင့်အကျိုးဆက်များ၏ 5-Factor ဟိုက်ဘရစ်မော်ဒယ်. J ကိုပူပန် disorders (2017) 51: 14-21 ။ 10.1016 / j.janxdis.2017.08.001 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22 ။ Cano MA, က de Dios MA, ကော်ရဲရား-ဖာနန်ဒက်ဇ V ကို, Childress S ကိုအာဗြံ JL, Roncancio လေး။ ဟစ်စပန်းနစ်ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားတွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာ domains များနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းပြင်းထန်မှု: ကျား၏ဆန်းစစ်စိစစ်ဆိုးကျိုးများ. စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2017) 72: 72-8 ။ 10.1016 / j.addbeh.2017.03.015 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23 ။ Corral-Frias NS, Nikolova YS, Michalski LJ, Baranger DA, Hariri AR, Bogdan R. စိတ်ဖိစီးမှု-related anhedonia ဆုချမှ ventral striatum reactivity ကိုနှင့် transdiagnostic စိတ်ရောဂါ symptomatology နှင့်ဆက်စပ်နေသည်. Psychol Med (2015) 45(12): 2605-17 ။ 10.1017 / S0033291715000525 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
24 ။ Brikmanis K ကို Petersen တစ်ဦးက, Doran N. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုထိခိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Non-နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်သူတို့တွင်သည်အခြားဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပါနဲ့? စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2017) 75: 79-84 ။ 10.1016 / j.addbeh.2017.07.008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25 ။ ကွတ် JW, Lanza ST, Chu W က, Baker တီဘီ, Piper ME ။ တစ်ဦးနုတ်ထွက်ဆေးလိပ်သောက်ကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းတဏှာနှင့်အတူ၎င်း၏ပြောင်းလဲနေသောဆက်ဆံရေး, အနုတ်လက္ခဏာကိုအကျိုးသက်ရောက်နှင့်ကုသမှု: Anhedonia. နီကိုတင်းတောဘ Res (2017) 19(6): 703-9 ။ 10.1093 / ntr / ntw247 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26 ။ ကျောက်ခေတ် MD, Audrain-McGovern J ကို, Leventhal လေး။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်စတင်အတူ anhedonia ၏အစည်းအရုံး. နီကိုတင်းတောဘ Res (2017) 19(6): 738-42 ။ 10.1093 / ntr / ntw177 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27 ။ Guillot CR, Halliday TM, ပက်ထရစ် MG, Pang RD, Leventhal လေး။ အပြုသဘော၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သာယာသောခန့်မှန်း, အနုတ်လက္ခဏာနှင့်ဆေးလိပ်သောက်-ဆက်စပ်ရုပ်ပုံများအဖြစ် Anhedonia နှင့် abstinence. နီကိုတင်းတောဘ Res (2017) 19(6): 743-9 ။ 10.1093 / ntr / ntx036 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28 ။ Piper ME, Vasilenko လုပ် SA, ကွတ် JW, Lanza ST ။ ဘာကွာခြားချက်တစ်ရက်စေသည်: တစ်ဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းကနဦး abstinence တုံ့ပြန်ကွဲပြားခြားနားမှု. စှဲမွဲမှု (2017) 112(2): 330-9 ။ 10.1111 / add.13613 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29 ။ Roys M ကပေါင်းပင်ငွေကျပ်, Carrigan M က, MacKillop ဂျေ နီကိုတင်းမှီခို, anhedonia, အရေးတကြီးနှင့်ဆေးလိပ်သောက်စိတ်ရင်းအကြားအသင်းအဖွဲ့များ. စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2016) 62: 145-51 ။ 10.1016 / j.addbeh.2016.06.002 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30 ။ အင်အားကြီး JM, ကာရိုး AJ, Veluz-Wilkins တို့ et al AK, Blazekovic S က, Gariti P ကို, Leone FT ။ ယောက်ျားနှိုင်းယှဉ်မိန်းမတို့အဘို့ သာ. ကြီးချုပ်ရာဆေးလိပ်အပေါ် anhedonia ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Is? နီကိုတင်းတောဘ Res (2017) 19(1): 119-23 ။ 10.1093 / ntr / ntw148 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
31 ။ Chuang CW, ချမ်းကို C, Leventhal လေး။ comorbid tabacco အသုံးပြုမှုနှင့်မပါဘဲအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒနှင့်တစ်သက်တာသမိုင်း. J ကို Dual-Diagn (2016) 12: 27-35 ။ 10.1080 / 15504263.2016.1146557 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32 ။ Leventhal လေး, ချို J ကို, ကျောက်ခေတ် MD, Barrington-Trimis JL, Chou က CP, Sussman SY, et al ။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး anhedonia နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းတင်းမာမှုကြားကအသင်းအဖွဲ့များ. စှဲမွဲမှု (2017) 112(12): 2182-90 ။ 10.1111 / add.13912 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
33 ။ အသည်း GI, Sloan DM, Pizzagalli DA, Hart သမဝါယမ, Kamholz BW, Rosebrock LE, et al ။ စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဆေးလိပ်သောက်, anhedonia နှင့်ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များ. ပြုမူနေ Ther (2014) 45(5): 651-63 ။ 10.1016 / j.beth.2014.02.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34 ။ ကွတ် JW, Piper ME, Leventhal လေး, Schlam TR, Fiore MC, Baker တီဘီ။ ဆေးရွက်ကြီးဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် Anhedonia. J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol (2015) 124(1): 215-25 ။ 10.1037 / abn0000016 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35 ။ Leventhal လေး, Trujillo M က, Ameringer KJ, Tidey JW, Sussman S က, Kahler CW ။ Anhedonia နှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်မူးယစ်ဆေးများနှင့် nondrug စစ်ကူ၏ဆွေမျိုးဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို. J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol (2014) 123(2): 375-86 ။ 10.1037 / a0036384 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
36 ။ Leventhal လေး, Piper ME, Japuntich SJ, Baker တီဘီ, ကွတ် JW ။ Anhedonia, စိတ်ဓာတ်ကျစိတ်နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းရလဒ်ကို. J ကို Clin Psychol တိုင်ပင်ပါ (2014) 82(1): 122-9 ။ 10.1037 / a0035046 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
37 ။ Albertella L ကို, Le Pelley ME, Copeland ဂျေ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းအမျိုးသမီးအတွက်မြင့်မားတဲ့အနုတ်လက္ခဏာ schizotypy နှင့်ဆက်စပ်နေသည်. EUR စိတ်ရောဂါကုသမှု (2017) 45: 235-41 ။ 10.1016 / j.eurpsy.2017.07.009 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38 ။ Lichenstein SD, Musselman S က, Shaw က DS, Sitnick S ကို Forbes မဂ္ဂဇင်း EE ။ နျူကလိယအသက်အရွယ် 20 မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏လမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် accumbens နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာခန့်မှန်း. စှဲမွဲမှု (2017) 112(11): 1961-70 ။ 10.1111 / add.13882 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39 ။ Feingold: D, Rehm J ကို, Lev-ပြေးအက်စ် ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ၏သင်တန်းနှင့်ရလဒ်ကို: လူဦးရေကိုအခြေခံပြီး longitudinal လေ့လာမှု. စိတ်ရောဂါကုသမှု Res (2017) 251: 225-34 ။ 10.1016 / j.psychres.2017.02.027 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
40 ။ Parvaz MA, ဂဗ်ဗဲ V ကို, Malaker P ကို, တိန်း RZ ။ anhedonia ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ခြေရာခံခြင်း မှတဆင့် ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ. မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ (2016) 164: 158-65 ။ 10.1016 / j.drugalcdep.2016.05.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
41 ။ Mori KP, De Sanctis P ကို, Garavan H ကို, Foxe JJ ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာ variable ကိုဆုလာဘ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်တာဝန်-စောင့်ကြည့်စနစ်များကိုထိန်းညှိ. Psychopharmacology (Berl) (2016) 233(6):1105–18. 10.1007/s00213-015-4191-8 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
42 ။ Mori KP, De Sanctis P ကို, Garavan H ကို, Foxe JJ ။ အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆုလာဘ် dysregulation: ကင်းချိုးဖောက်တဲ့ High-density ကိုလျှပ်စစ်မြေပုံလေ့လာမှု. Neuropharmacology (2014) 85: 397-407 ။ 10.1016 / j.neuropharm.2014.05.016 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
43 ။ ကောင်းသော, DC, Gjini K ကို Burroughs လုပ် SA, Boutros NN ။ ကိုကင်း-မှီခိုလူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်စိတ္တကျရောက်နေတဲ့နှင့်အာရုံခံ Gates တို့အကြားအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့. စိတ်ရောဂါကုသမှု Res (2013) 210: 1092-100 ။ 10.1016 / j.psychres.2013.08.049 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44 ။ Garfield JBB, လဲမှို့သည် SM, Allen က NB, Cheetham တစ်ဦးက, Kras M က, Yucel M က, et al ။ anhedonia မကြာသေးမီအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ် opioid မှီခိုတဲ့လက္ခဏာကြောင်းကိုသက်သေအထောက်အထား. မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ (2017) 177: 29-38 ။ 10.1016 / j.drugalcdep.2017.03.012 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45 ။ Krupitsky အီး, Zvartau အီး, Blokhina အီး, Verbitskaya အီး, Wahlgren V ကို, Tsoy-Podosenin M က, et al ။ Anhedonia, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, opiate မှီခိုလူနာအတွက်တဏှာပါးစပ် naltrexone သို့မဟုတ်တစ်ခုတိုးချဲ့ဖြန့်ချိ naltrexone implants အပေါ်တည်ငြိမ်. နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု (2016) 42(5): 614-20 ။ 10.1080 / 00952990.2016.1197231 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
46 ။ et al Huhn AS, Meyer RE, Harris က JD, Ayaz H ကို, Deneke အီး, Stankoski DM ။ ဆေးညွှန်း opiate မှီခိုနှင့်အတူ Post-ဆုတ်ခွာလူနာအကြား prefrontal cortex အတွက် anhedonia နှင့် differential ကိုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏သက်သေအထောက်အထားများ. ဦးနှောက် Res Bull (2016) 123: 102-9 ။ 10.1016 / j.brainresbull.2015.12.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47 ။ et al Zaaijer ER, ဗန် Dijk L ကို, က de Bruin K ကို Goudriaan AE, Lammers LA က, Koeter မဂ္ဂါဝပ်။ ဘိန်းဖြူ-မှီခိုလူနာ striatal dopamine Transporter ရရှိနိုင်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့် anhedonia အပေါ်တိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန် naltrexone ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု. Psychopharmacology (Berl) (2015) 232(14):2597–607. 10.1007/s00213-015-3891-4 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
48 ။ Pettorruso M က, Martinotti, G, Fasano တစ်ဦးက, Loria, G, Di Nicola M က, De Risio L ကို, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မရှိဘဲပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာ Anhedonia: တစ်ကိစ္စတွင်-ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာမှု. စိတ်ရောဂါကုသမှု Res (2014) 215(2): 448-52 ။ 10.1016 / j.psychres.2013.12.013 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
49 ။ Rizvi SJ, Sproule BA, Gallaugher L ကို, McIntyre RS, ကနေဒီ SH ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက် benzodiazepine အသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှု: anhedonia ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု. J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု (2015) 187: 101-5 ။ 10.1016 / j.jad.2015.07.040 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
50 ။ Snaith RP, Hamilton က M ကို, Morley S က, Humayan တစ်ဦးက, Hargreaves: D, Trigwell P. hedonic သေံ၏အကဲဖြတ်သည့် Snaith-Hamilton ကပျော်ရွှင်မှုစကေးများအတွက်တစ်ဦးကစကေး. br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (1995) 167(1): 99-103 ။ 10.1192 / bjp.167.1.99 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
51 ။ Rizvi SJ, Pizzagalli DA, Sproule BA, ကနေဒီ SH ။ စိတ်ကျရောဂါအတွက် anhedonia အကဲဖြတ်: အလားအလာများနှင့်ထောငျခြော. neuroscience Biobehav ဗြာ (2016) 65: 21-35 ။ 10.1016 / j.neubiorev.2016.03.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
52 ။ Andreoni M က, Babudieri S က, ဘရူနိုက S, ကိုလံဘို M က, Zignego AL, Di Marco V ကို, et al ။ HCV အတွက်လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုများ: အီတလီကျွမ်းကျင်သူများက panel ကထဲကနေထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို. ရောဂါကူးစက် (2018) 46(2):147–63. 10.1007/s15010-017-1093-1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
53 ။ ကိုလံဘို: D, Palacios AG က, Alvarez ကို JF, Patane တစ်ဦးက, Semonella M က, Cipresso P ကို, et al ။ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ် protocol ကို: အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါများအတွက်နည်းပညာ-based ဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကြားဝင်၏လက်ရှိပြည်နယ်နှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်. Syst ဗြာ (2018) 7(1):233. 10.1186/s13643-018-0899-y [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
54 ။ Pizzagalli DA, ကေတီဟုမ်း AJ, Dillon DG, Goetz EL, Birk JL, Bogdan R ကို, et al ။ လျှော့ချ caudate နှင့်နျူကလိယကိုအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူ unmedicated တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန် accumbens. နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (2009) 166(6): 702-10 ။ 10.1176 / appi.ajp.2008.08081201 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
55 ။ Treadway MT, Buckholtz JW, Schwartzman AN, လမ်းဘတ် WE, Zald DH ။ ကို 'EEfRT' 'တန်ဖိုးရှိ? လှုံ့ဆျောမှုနှင့် anhedonia တစ်ဦးရည်မှန်းချက်အတိုင်းအတာအဖြစ်ဆုလာဘ်တာဝန်များအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအသုံးစရိတ်. PLoS တစ်ခုမှာ (2009) 4(8): e6598 ။ 10.1371 / journal.pone.0006598 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
56 ။ Cooper ကဂျာ Arulpragasam AR, Treadway MT ။ စိတ်ကျရောဂါအတွက် Anhedonia: ဇီဝဗေဒယန္တရားများနှင့်ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာမော်ဒယ်များ. Curr Opin ပြုမူနေသိပ္ပံ (2018) 22: 128-35 ။ 10.1016 / j.cobeha.2018.01.024 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
57 ။ Elsayed မိုင်ကင်မ် MJ, Fields KM, Olvera RL, Hariri AR, Williamson DE ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအရက်သေစာစတင်နှင့်အသုံးပြုခြင်း၏လမ်းကြောင်း: စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် amygdala reactivity ကို၏အခန်းကဏ္ဍကို. J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု (2018) 57(8): 550-60 ။ 10.1016 / j.jaac.2018.05.011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
58 ။ Blum K သည်, et al Gondre-Lewis က MC, Baron: D, Thanos PK, Braverman ER, Neary J ကို။ ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ, ရှိသမျှစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုအထောက်အပံ့ပေးတယ်သောဆောက်လုပ်ရေးမိတ်ဆက်ခြင်းတိကျစွာစွဲစီမံခန့်ခွဲမှု. တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2018) 9: 548 ။ 10.3389 / fpsyt.2018.00548 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
59 ။ Boger KD, Auerbach RP, Pechtel P ကို, Busch AB, Greenfield SF, Pizzagalli DA ။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက် co-ဖြစ်ပေါ်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်: ကုသမှုစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တုန့်ပြန်၏စာမေးပွဲ. J ကို Psychother Integrated (2014) 24(2): 109-21 ။ 10.1037 / a0036975 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
60 ။ McCabe ကို C, Mishor Z ကို, Cowen PJ, Harmer CJ ။ ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor ကုသမှုစဉ်အတွင်းဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများလျော့နည်းသွားအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့. Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2010) 67(5): 439-45 ။ 10.1016 / j.biopsych.2009.11.001 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
61 ။ Nierenberg AA ကို, Keefe BR, Leslie VC ကို, Alpert je, Pava ဂျာ Worthington JJ, et al ။ fluoxetine မှ acute တုံ့ပွနျသူစိတ်ဓာတ်ကျလူနာအတွက်ကျန်နေတဲ့လက္ခဏာတွေ. J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု (1999) 60(4):221–5. 10.4088/JCP.v60n0403 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
62 ။ စျေး J ကို, ကိုးလ် V ကို, Goodwin က GM က။ ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors ၏စိတ်ခံစားမှုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ: အရည်အသွေးလေ့လာမှု. br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (2009) 195(3): 211-7 ။ 10.1192 / bjp.bp.108.051110 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
63 ။ Lally N ကို, Nugent AC အ, Luckenbaugh DA, Ameli R ကို, Roiser JP, Zarate CA. anti-anhedonic ketamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါအတွက်၎င်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်. ဘာသာပြန်စိတ်ရောဂါကုသမှု (2014) 4: e469 ။ 10.1038 / tp.2014.105 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
64 ။ သောမတ်စ် RK, Baker, G, Lind J ကို, Dursun အက်စ် ထိရောက်မှု၏လက်တွေ့ခန့်မှန်းအဖြစ်အခြေခံ anhedonia နှင့်စိတ်ကြွများအတွက်လက်တွေ့ setting ကိုများနှင့်သက်သေအထောက်အထားအတွက် ultraresistant စိတ်ကျရောဂါဘို့သွေးကြောသွင်း ketamine ၏လျင်မြန်ထိရောက်မှု. J ကို Psychopharmacol (2018) 32(10): 1110-7 ။ 10.1177 / 0269881118793104 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
65 ။ ဂျုံးစ် JL, Mateus CF, Malcolm RJ, Brady KT, Back ကို SE ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များ၏ကုသမှု ketamine ၏ထိရောက်မှု: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု. တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2018) 9: 277 ။ 10.3389 / fpsyt.2018.00277 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
66 ။ Korhonen T က, Kinnunen TH, Garvey AJ ။ Pre-ချုပ်ရာစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများအားဖြင့် Post-ရပ်နားခြင်းစိတ်ဓါတ်များပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု. တောဘသွေးဆောင် dis (2006) 3:17–33. 10.1186/1617-9625-3-2-17 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
67 ။ et al EJ, ရော့စ်တီဂျေ, Salmeron BJ, Lee က M ကို, Shakleya DM, Huestis MA, ထလေ၏။ acute နီကိုတင်း differential သက်ရောက်မှု anticipatory valence- နှင့်ပြင်းအား-related striatal လှုပ်ရှားမှု. Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 73(3): 280-8 ။ 10.1016 / j.biopsych.2012.06.034 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
68 ။ Martinotti, G, Orsolini L ကို, Fornaro M က, Vecchiotti R ကို, De Berardis: D, Iasevoli က F, et al ။ လက်ရှိသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အနာဂတ်ရှုထောင့်: အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါအတွက် relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်တဏှာအဘို့အ Aripiprazole. ကျွမ်းကျင်သူ Opin စုံစမ်းစစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးဝါး (2016) 25(6): 719-28 ။ 10.1080 / 13543784.2016.1175431 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]